Myanmar Monk Student Association: December 2010
* သာရော = အနှစ်သာရ မည်၏။
* မာတာပီတု = မိဖသဖွယ် မည်၏။
* အာစရိယော = ဆရာသမားနှင့် တူ၏ ။
* မိတ္တော = မိတ်ဆွေနှင့် တူ၏ ဟူသော ဂုဏ်လေးမျိုး ရှိလေသည်။ အကျိုးတရားများမှာ -
* ဥာဏိ = ဥာဏ်ကြီးရှင် ဖြစ်နိုင်ခြင်း
* မဟာ = ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သူ ဖြစ်နိုင်ခြင်း
* ဗဟုသုတော = အကြားအမြင် များနိုင်ခြင်း ဟူသော အကျိ်ုးကျေးဇူးများလည်း ရရှိနိုင်လေသည်။
1. ↑ ဆရာကြီး တက်တိုး ၏ လောကနီတိ
Retrieved from "http://www.wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%90%E1%80%AD"
Categories: ဗုဒ္ဓဘာသာ | မြန်မာ့ ဓလေ့ထုံးစံ
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Tuesday, 28 December 2010
လောကနိတိ အခန်း(၄ )
လောကနိတိ အခန်း( ၂ )
လောကနိတိ အခန်း( ၁ )
MMSA အဖွဲ့မှ Sanyato (သညတော) ဓမ္မရိပ်သာသို့ ဆွမ်းပဒေသာငွေလှူ
Chiang Mai DEC 24.2010
(MMSA) မြန်မာ ရဟန်းကျောင်းသားများ အဖွဲ့ (Mahachulalongkorn.University, Chiang Mai, Thai) မှ သံဃာတော်များသည် 15 , Dec,2010 နေ့မှ စတင်သော တရားထိုင်ခရီး (meditation retreat )ထွက်ကြသော မဟာချူလာ ကျောင်းသား ဓမ္မယောဂီများအတွက် အစစ အရာရာ ဆောင်ရွက်ပါရမီ ဖြည့်ပေးသော Sanyato (သညတော) ဓမ္မရိပ်သာ၌ ဆွမ်းပဒေသာပင်အဖြစ် ဘတ်ငွေ (3000)ကို ဓမ္မရိပ်သာဆိုင်ရာ ယာယီ တာဝန်ခံ ဆရာ Visuttichai သို့ အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်စား ဦးဝရသာမိလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Sunday, 26 December 2010
“ကျင်” ဝေါဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးရေးဖွဲ့တတ်သည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ဦးရာဇ်တောင်ဘုရားသမိုင်း လင်္ကာ၌ “လောကီဘက်က၊ ဆောင်ရွက်တခန်း၊ ကျင်လက်ပန်းနှင့်၊ မြီဝန်းရုပ်သီး၊ ရှုမငြီးအောင်” ဟူ၍ူ ရေးဖွဲ့ထားသည်။
ဆယ့်နှစ်လရာသီလင်္ကာတပိုဒ်တွင် “မယ်လျှင်စစ်မှာ၊ စိတ်ကြီးပျက်လို့၊ ကျင်ကိုင်လက်ပန်း၊ အခန်းခန်းကို၊ အိမ်သူအကျွန်၊ မြင်ရပြန်ကေ၊ လွမ်းတော်တာရှည်၊ ပန်းမဉ္စူကို၊ နီပူထိုးကေ၊ ညှိုးလတ်တေလည်း” ဟူ၍ူ ဖွဲ့ဆိုထားပြန်သည်။
လမုချောင်းဆရာကျော်မဲ ရေးဖွဲ့သော မဟာဝိဟိံကရာဇဝင်လင်္ကာ (အပိုဒ်-၁၁၃) ၌ “ကခြေများဖြင့်၊ တီးကာရစ်မြည်၊ စည်ငါးမည်တည်း၊ သံရှည်ဟစ်ကြွေး၊ စုရုံးဝေးလျှက်၊ လက်ပွဲကျယင်၊ လုံးထွေးကျင်၍” ဟူ၍လည်းကောင်း
မန္တလေး ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီးဦးကျော်ရင်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း (၁၉၅၈-၅၉)၊ လုပ်သားပြည်သူ့နေ့ စဉ်သတင်းစာ (၂၄-၈-၆၄) တွင် ကျင်နှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးများကိုရေးသားထားရာ- “ကျင်ဟူသည်မှာ ကျားနှင့်ယင် ဝေါဟာရနှစ်လုံး ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်လာရကြောင်း၊ “ကျားယင်၊ ယင်-ကျား” ကစားနည်းကို အခြေခံ၍ ကျင်ဖြစ်ပေါ်လာရကြောင်း ဆိုထားသည်။ “ကျားယင်” ကစပ်နည်း၊ ကျားကယင်ကို အုပ်ဖမ်းလိုက်၊ ယင်က ရှောင်ပြီးလိုက်နှင့် ယင်အကောင်နှစ်ဆယ်ကို ကျားနှစ်ကောင်က အနိုင်လိုက်ဖမ်းရန် အကွက်ရွှေ့ ကစားနည်းကိုအခြေမှီပြီး ကျင်သန်နှစ်ဦး ဖမ်းလိုက်၊ ခံလိုက်၊ ပစ်ချလိုက်နှင့် မြေသို့ကျအောင် ကစားရသော နည်းအတတ်ပညာ” ဟူ၍ ရှင်းပြထားသည်။
တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများ (ရခိုင်) (၁၉၇၆) စာအုပ်၌ကား “ကျင်ဟူသည်မှာ ကျားလျှင်မှ ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကျားသည် သားကောင်ကိုဖမ်းသည့်အခါ လျှင်မြန်သည့်အဟုန်ဖြင့် ဖမ်းအောင်းရသကဲ့သို့ ဖြတ်လတ်လျှင်မြန်ရသည့်အတွက် “ကျားလျှင်” ဟုခေါ်ရာမှ ကျင်ဖြစ်လာသည်” ဟုဆိုထားသည်။
ဆရာကြီးဦးလုံး ရေးသားသော “ရခိုင်ကျင် ကကွက် စာတမ်း” တွင်မူ “ဖမ်းလူခံလူ၊ တူတူလုံး၊ ဒုံးဒုံးလည်းချ၊ အကျလည်းယင်၊ ကျယင်၊ ကျယင် ... ကျင်” ရေးသားထားသည် ကို တွေ့ရသည်။
သဇင်နွယ် (မန္တလေးတက်ကသိုလ်) ၏ လက်နှိပ်စက်မူ ကျင်စာတမ်းငယ်၌ “ကျားကဲ့သို့ ခွန်အားဗလနှင့် ပညာကိုအသုံးချကိုင်ရသည့် အားကစားနည်းဖြစ်သည့် “ကျားအင်” လို့ခေါ်ရာမှ “ကျင်” ဖြစ်လာကြောင်း ဆိုထားပြန်သည်။
ရမ္မာဝတီပညာစာရနှင့် လှအောင်ရွှေတို့ ရေးသားသည့် “ရမ္မာဝတီတေးကဗျာများစာအုပ်” (၁၉၉၀) တွင်လည်း ရမ်းဗြဲဒေသိယသဘာဝတေးကဗျာတချို့ကို တွေ့ ရပြီး ထိုကဗျာများထဲတွင် ကျင်ဝေါဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ “ကျအယင်၊ ကျီးယင်၊ ကျယင်၊ ကျအားယင်” စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးအသံထွက်ကာ ဖွဲ့ဆိုရေးသားထားသည်ကို တွေ့ ရသည်။ ကဗျာတပိုဒ်ကိုထောက်ပြရလျှင် - “ရွာဘုံကေရာ သောင်းလဲ၊ များဘုံဆင်ကေ၊ ရွာတွင်လူများ၊ ကျအင်တိုက်တေ ထိုပွဲလယ်မှာ၊ မျှောကာကြည့်ကေ၊ ဝမ်းနည်းနည်းနှင့်” ဟူ၍ ဒေသိယလီသံဖြင့် ဖွဲ့ဆိုထားသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ မြောက်ဦးခေတ်တွင် ဓမ္မရာ (ထမရာ၊ အမရာ) မင်းသား ကျင်အတတ်ပညာသင်ယူပုံနှင့် ပတ်သက်၍ “ထမရာဖွဲ့” ၌ -
“ကျောက်တလင်းတွင်၊ ပျော်ပွဲရွှင်သောင်းသဲ၊ ကတူပွဲနှင့်၊ ပျော်ပွဲသဘင်၊ ကျင်ခြင်းသင်၍၊ ကာကောင်းခြင်းနှင့်၊ သိုင်းခြင်းသုံးဆယ်၊ သင်လတ်တေလေး။ ဒိုင်းခြင်းသုံးဆယ် သင်လတ်တေလေး။ စစ်ဆုတ်စစ်တက်၊ သင်လတ်တေလေး” ဟူ၍ တွေ့ ရသည်။
မဇ္ဈိမဒေသ အရေးတော်ပုံ ကျမ်းနိဒါန်းရှည် (စာ-ငဲ) တွင်လည်း - “ရခိုင်သားရို့သည် ဗဒုံမင်း၏ခိုင်းစေခြင်းအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်ကတ်ရသည်။ ၎င်းရို့မှာ အမရပူရနီပြည်တော်တွင်ကျင်းပသော ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် အတီးအမှုတ်၊ အကအခုန်၊ ကျယင်စသော ဖြေဖျော်မှုများ လားရောက်ဆောင်ရွက်ရ၏။” ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း (ဒုတွဲ)(စာ ၂၉၆) (ရခိုင်သားကြီးစာပီထုတ်) တွင်လည်း -
ကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ စကားပုံ၊ ဥပမာတချို့လည်းဟိသည်။ “အဘကျင်သန်၊ သားအင်တန်” “ကျင်သန်အို ကြက်နှင်မရ” “ကစပ်ကြီးကေ ကျင်ဖြစ်တေ” စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျင် (ကြိ) ။ မြီကြီးနှင့်ရောနီသော ရွှေမှုန့်၊ ငွေမှုန့်များကို ကျင်ခွက်တွင်ထည့်ကာ ရီတွင်သဲ့ယူသည်။ ကျင် (ကြိ) ။ တတ်မြောက်လိမ်မာသည်။ “လူ့ပြည်နတ်ပြည်၊ ဘုံသုံးထပ်တွင်၊ နိုင်အံ့မထင်၊ ပညာကျင်သည်၊ ထွတ်တင်မော်ကွန်းထား၏တည်း” ကျင်ကိုင် (ကြိ)(ရခိုင်) ။ တဦးနှင့်တဦး၊ အနိုင်အယှုံးလုံးသတ်သည်။ တောင်ကျော်ကိုင်သည်၊ နပန်းလုံးသည် - ဟူ၍ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ကျင်ဝေါဟာရအဓိပ္ပါယ်ကို နိဂုံးကောက်ချက်ချပါက ကျင်ဆိုသည်မှာ ကျင်ပင်ဖြစ်သည်ဟု၍ ဆိုရပေမည်။ ကျွမ်းကျင်သည်။ ကျင်လည်သည်။ ကျင်ပစ်ချသည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျင်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်ကျောင်းဆရာတော်၏ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်းအပါအဝင် ရခိုင်ရာဇဝင်ကျမ်းတချို့၏အလိုအရ လက်ပန်းသည်ရို့ လက်ပန်းသတ်ကြသည်ကို ၀ါသုဒေဝ၊ ဗလဒေဝခေတ် (ဘီစီ ၆၀၀ ကျော်လောက်က) ရှိဦးစွာ ဒွါရာတီခေတ်ကပင်ဟိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဝါသုဒေဝ၊ ဗလဒေဝရို့ မင်းညီနောင်တကျိပ်သည် ဦးရီးတော်ကံသမင်းကြီး ထောင်ချောက်ဆင်ကျင်းပသည့် လက်ပန်းသတ်ပွဲ၌ စာရုယလက်ပန်းသည် မုဠိအလက်ပန်းသည်ရို့နှင့် လုံးသတ်အနိုင်ရပြီးနောက် ပြည်သိမ်းပုံများကို ရွီးဖွဲ့ထားသည်။ ဦးရာဇ်တောင်ဘုရားသမိုင်းလင်္ကာ “ကျင်လက်ပန်းနှင့်၊ မြီဝန်းရုပ်သီး ရှုမငြီးအောင်” ဟူ၍ရွီးဖွဲ့ထားသည့်အတွက် ကျင်ကိုလက်ပန်းလုံးပွဲဟုလည်းခေါ်သည်။
ပါမောက္ခချုပ်ဦးကျော်ရင်၏ “ရခိုင်ရိုးရာအတတ် ကိုယ်ပိုင်ပညာကျင်ပွဲ” (ရခိုင်တန်ဆောင် ၁၉၅၈) ဆောင်ပါးတွင် -
“ရှိရခိုင်မင်းဆက်များလက်ထက်တွင် ဘီလူးကို အသီသတ်ခသော ကျင်သမားဟုဟိသည်။ ထိုနည်းတူ မွန်မင်းများလက်ထက်တွင်လည်း အသားမင်းသားမှာ ခုနစ်တောင်မြင့်သော ကုလားလန်ဘားနှင့် နပန်းလုံးသတ်ခသည်။ မြန်မာရာဇဝင်တွင်လည်း ရန်မန်ထွေးသည် မိကျောင်း၊ ကျား၊ ဆင်ရို့နှင့်နပန်းလုံးကာ သတ်ပုတ်အောင်မြင်၍ အနန္ဒသူရိယဘွဲ့ကိုပင် ရဟိခသည်။ အသားမင်းသား ကုလားလန်ဘားနှင့် နပန်းသတ်သည်မှာ ရာဇဝင်အရ နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ဟိလတ်ပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်လည်း နပန်းလုံးအတတ်ပေါ်ပေါက် ခေတ်စားသည်မှာ နှစ်ပေါင်းထောင့်ငါးရာကျော်လတ်ပြီ။ ဤအကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုထောက်၍် ရခိုင်ပြည်တွင်လည်း ကျင်အတတ်ပေါ်ပေါက်ခသည်မှာ နှစ်ပေါင်းတထောင်ထက်မလျော့နိုင်ဟု တွေးမိသည်။” ဟူ၍ သုံးသပ်ပြထားသည်။
ဝေသာလီခေတ် စူဠစန္ဒြားမင်းလက်ထက်၌ အမတ်ကြီးဓမ္မဇေယျသည် “ဗျည်း-၃၃ လုံးလှီလှော်သံ” ကိုစပ်ဆိုခသည်။ ယင်းလှီလှော်သံကို ကျင်သန်ကြီးများက ပြိုင်တူရွတ်ဆို၍ စည်ကြီးဗြိန်းစောင်းတီးကာ ပြိုင်လောင်းကြီးများကိုလှော်၍ ရခိုင်ရီတပ်မကြီးဖြင့် စစ်ချီထွက်ကြောင်းဆိုထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း (ပဉ္စမတွဲ) (ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍ) စာ-၁၈၈ ၌ -
“ကိုးစိတ်ကိုးလံ၊ ကိုးပင်းကန်၊ ကျင်သန်တိရာတက်ပျာစီးလို့၊ မဟာလောင်းကြီးထွက်လို့လာ” (ရခိုင်ညွန်ဖူး၊ ၁၉၆၈--စာ-၈၃) “ကိုးဆယ့်ကိုးလံ၊ ကိုးပင်းကန်၊ ကျင်သန်တပြီး၊ စည်တတီး” စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ မြောက်ဦးခေတ် “ထမရာဖွဲ့” ၌လည်း ကျင်ခြင်း၊ ကာခြင်း၊ သိုင်းခြင်း၊ ဒိုင်းခြင်းအတတ်ပညာများ သင်ယူပုံကိုဖွဲ့ဆိုထားဟိပြီးဖြစ်သည်။ အမရပူရနေပြည်တော်၌ ကျင်ဖြေဖျော်မှုပြုလုပ်ပုံကိုလည်း “မဇ္ဈိမဒေသအရေးတော်ပုံကျမ်း” ၌ တွိရသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုသက်သီအဖြစ် သျှစ်သောင်းဘုရားလှိုဏ်ဂူပတ်တွင်း၌ ကျင်းအားကစပ်နည်းဆိုင်ရာ ရုပ်လုံးရုပ်ကြွများ ထွင်းထုထားသည်ကို ကနိထိ တွိမြင်နိုင်သည်။
ဤအကြောင်းအချက်များကိုဆက်စပ်၍ ကျင်အားကစပ်နည်းအတတ်ပညာသည် ရှိခေတ်အဆက်ဆက် ရခိုင်မင်းများလက်ထက်ကပင် ဆင်းသက်လာသည့် နည်းပညာရပ်ဖြစ်သည်ကို တိတိကျကျပြောနိုင်သည်။ ရှိရခိုင်မင်းများလက်ထက်ကပင် ရခိုင်ရိုးရာကျင်ပွဲများကို မင်းညီလာခံနန်းတွင်းသဘင်များ၌ ကျင်းပလာမြဲဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်အဝှမ်း မြို့ပြကျွန်းရွာဒေသများ၌ စည်စည်ကားကား ထူးထူးခြားခြားကျင်းပသည်။ ကျင်ပွဲ၊ ပြိုင်လောင်းပွဲများသည် ရခိုင်ရို့၏တိုက်ရေး၊ ခိုက်ရေး၊ စစ်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ အားမာန်တက်ကြွမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုများအတွက်လည်းကောင်း၊ နန်းတွင်းနန်းပြင်၊ မြို့ပြကျွန်းရွာမကျန် စည်ကားမြိုင်ဆိုင်စွာကျင်းပသည့် ပညာတရပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်းပွဲ၊ ရွာပွဲ၊ ဘုရားပွဲ၊ ထီးတင်ပွဲ၊ ဈာပနပွဲ၊ မယ်တော်ပျံပွဲ၊ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ပြိုင်လောင်းပွဲ၊ ရထားပွဲစသည့် ပွဲတော်တိုင်း၌ ကျင်ပွဲမပါလျှင်မပြီးဆိုလောက်သည်။
ကျင်ခေတ်ဦးက တပွဲလုံး၌ နောက်ဆုံးအနိုင်ရဗိုလ်စွဲသူကို ဘုရင်၊ မိဖုရားရို့ကိုယ်တိုင် “ပန်းစည်းဆု” ချီးမြှင့်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ ဆုချီးမြှင့်ပုံစနစ်သည် ရှိဂရိပြည် အိုလံပစ်ပွဲ၌ “လောရယ်” (ခေါ်) သစ်ခွပန်းစည်းဆု ချီးမြှင့်ပုံနှင့်တူကြောင်း သဇင်နွယ်၏စာတမ်းငယ်၌ ရွီးသားထားသည်။ ယခုထိကျင်သန်များအား “ပန်းဆု”ဟူ၍ူ ချီးမြှင့်သည်ကို တချို့နီရာများ၌ တွိရသိမ့်သည်။
ရှိက ကျင်ပွဲကိ ရွှေမောင်းတန်း၊ ငွေမောင်းတန်းဟူ၍ ခွဲခြားကျင်းပသည်။ ပထမတန်း၌ နောက်ဆုံးအနိုင်ရဗိုလ်စွဲသူကို ရွှေမောင်ဆု၊ ဒုတိယတန်း၌ နောက်ဆုံးအနိုင်ရဗိုလ်စွဲသူကို ငွေမောင်းဆုများချီးမြှင့်သည်။ ရွှေမောင်း၊ ငွေမောင်းများမှာ တစ်ကျပ်၊ တစ်ကျပ်ခွဲထိ အလီးဟိပြီး တံဆိပ်ခပ်နှိပ်ကာ ပိုးကြိုး၊ သိုးမွှီးကြိုးကျစ်၍ လိုင်ဖင်း၌စွပ်၍ ချီးမြှင့်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာလက်ထက်က အင်္ဂလိပ် “မယ်လ်ဒေးလ်” တံဆိပ်မျိုးခပ်နှိပ်ကာ ရွှေတံဆိပ်၊ ငွေတံဆိပ်များကို ချီးမြှင့်ခကတ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကနိခေတ်ထိ ရွှေမောင်း၊ ငွေမောင်းဆုများကို ရှိမူမပျက်ချီးမြှင့်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည်။ ကျင်တခေတ်ဆန်းသစ်လာသော ကနိကာလ၌ ကားကျင်ပွဲများကို ခေတ်နှင့်အညီ ဆန်းသစ်တီထွင်ကာ ရွှေမောင်းဆုများကျည်း ချီးမြှင့်ကျင်းပလာလတ်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] ကျင်ပညာ၏နက်နဲပုံ၊ စနစ်ကျပုံနှင့် အကျိုးသက်ရောက်ပုံ
(၁) ကျင်ပညာသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးကြိတ်၊ သတ်ပုတ်၊ ကန်ကျောက်ပြီး ပြိုင်ဖက်အား အနာတရဖြစ်အောင် ဒေါမာန်ဖြင့်ကြံဆတိုက်ခိုက်သည့် နည်းပညာမဟုတ်။ (ဦးက္ခောင်း၊ ဒူး၊ တန်းတောင်၊ ခြီဖနာင့်၊ ခြီစောင်း၊ ခြီဖဝါး၊ လက်စောင်း၊ လက်ဝါး၊ လက်ညှိုး၊ လက်သီးစသည်များကိုသုံးပြီး (ထိုး၊ ရိုက်၊ ကျောက်၊ ကန်) သတ်ပုတ်ခြင်းမျိုး လုံးဝမပါဝင်ချေ။
(၂) ကျင်ပညာ အဖမ်းသားအနီဖြင့် လက်နှင့်ခြီကို အသုံးချသည့်အခါ (ထိုး၊ ရိုက်၊ ကျောက်၊ ကန်၊ သတ်ပုတ်) တိုက်ခိုက်ရန်အတွက်မဟုတ်ပဲ (ဆွဲ၊ ဖမ်း၊ ငင်၊ ဖက်၊ တိုး၊ ကန်၊ ပေါက်၊ ချိတ်၊ ကော်၊ ပင့်၊ လိမ်၊ ကျစ်) ရန်အတွက်သာလျှင် အသုံးချရသည်။
(၃) အခံကျင်သန်သည်လည်း အဖမ်းကျင်သန်က (ဆွဲ၊ ငင်၊ ပေါက်၊ ချိတ်၊ လိမ်၊ ကျစ်) လာသည့်အခါ စည်းကမ်းနည်းလမ်းတကျ (ယှောင်၊ ထွက်၊ ချွတ်၊ ထုတ်၊ ခါ၊ ပစ်၊ ပြန်ပစ်) ရန်အတွက်သာ မိမိ၏လက်နှင့်ခြီကို အသုံးချရသည်။ နာကြင်ကျိုးပဲ့အောင် ကြံစည်တုံ့ပြန်ခွင့်လုံးဝမဟိ။
(၄) အဖမ်းသားအခွင့်အရေးအနီဖြင့် အခံသားလက်ကိုဆွဲနည်း၊ မောင်းသတ်၊ မောင်းလိမ်၊ မောင်းကျပ်၊ မောင်းဖွင့်၊ မောင်းပြန်၊ မောင်းလွှဲနည်း၊ ခြီပေါက်နည်း၊ ချိတ်နည်း၊ ကော်နည်း၊ လိမ်နည်း၊ ကျစ်နည်း၊ ပစ်နည်း စသည်ဖြင့် လက်၊ ခြီများကို ကိုင်ပုံ၊ ပေါက်ပုံ၊ ကျစ်ပုံ စနစ်တကျဟိသည်။
(၅) အခံသားအခွင့်အရေးအနီဖြင့် ထိမ်းကိုင်၊ ဆီးကိုင်နည်း၊ ရုန်းယှောင်ထွက်နည်း၊ ခြီချွတ်လက်ချွတ်နည်း၊ ခါနည်း၊ ပစ်နည်း၊ ပြန်ပစ်နည်း၊ အပြန်ပစ်နည်းများသီးခြားစီ အပြန်အလှန်စနစ်တကျဟိသည်။
(၆) အဖမ်းသားကျင်သန်ကို အခွင့်အရေးပိုပီးထားပြီး ယင်းအခွင့်အရေးကို အခြင်း၊ အကွက်ဖြင့် စနစ်တကျ ကျင်ပညာအသုံးချကိုင်ကာ အခံကျင်သန်အားအနိုင်ရအောင် ပစ်ချရန်ဖြစ်သည်။ အခံသားကျင်သန်သည်လည်း အဖမ်းသားကျင်သန် ထိုကဲ့သို့ လုံးဖမ်းကိုင်တွယ်သမျှ ငုံ့ခံနီရုံမဟုတ်ပဲ အခံကျင်သန်၏ခုခံခွင့်အတတ်ပညာကိုပါ တီထွင်ဖန်တီးထားသည်။ အဖမ်းသား၏လုံးဖမ်းကိုင်တွယ်ခွင့်နှင့် အခံသား၏ခုခံကာကွယ်ခွင့် ပညာနှစ်ရပ်ကို သူတလှည့်ကိုယ်တလှည့်၊ သူတပြန်ကိုယ်တပြန် ကိုင်ခွင့်ပြုလျှက် ပညာစွမ်းပြရသည့် အားကစပ်နည်းပညာရပ်ဖြစ်သည်။
1. ကျင်ပညာသည် လူငယ်ရို့၏ တကိုယ်ရည်စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှု၊ ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုအတွက် အရေးပါသည့် နည်းပညာရပ်ဖြစ်သည်။
2. ဇွဲ၊ သက္တိကိုခိုင်မာစီသည်။ အခက်အခဲကို တဦးတည်း ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင် ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ရဲသည့်ုစိတ်ကို ရဟိစီသည်။
3. တက်ကြွမှုအားမာန်ကို ရစီသည်။
4. ယုံကြည်ချက်ပြည့်ဝစီပြီး ပြတ်သားခိုင်မာစီသည်။
5. ယုတ်ညံ့သိမ်ဖျင်းစိတ်၊ အားငယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်များကို ကင်းပျောက်စီသည်။
6. မိမိကိုယ်မိမိ အားကိုးယုံကြည်စိတ် မြင့်မားစီသည်။
7. ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်၊ ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုစိတ်ခိုင်မြဲစီသည်။
8. ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းမှု၊ လျှင်မြန်ဖျတ်လတ်မှုဖြစ်စီသည်။
9. လူ့ဘောင်ဝန်းကျင်နှင့် ပေါင်သင်းဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စီသည်။
10. အများအကျိုး၊ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကာယ၊ ဉာဏ်စွမ်းရည်များကိုပြည့်ဝစီသည်။
သို့ဖြစ်၍ ဤအမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၊ အမျိုးဂုဏ်ပေါ်လွင်စီသည့် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အစစ်အမှန်ဖြစ်သည့် ကျင်အားကစပ်နည်းပညာရပ်ကို ရခိုင်လူငယ်တိုင်း နားလည်ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပြီး လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသ်ိမ်းရမည်။ သို့မှသာ ကျင်ပညာ၏ဂုဏ်ရည်၊ အမျိုးသားဂုဏ်ရည် ပိုမိုတိုးတက်တောက်ပြောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] ကျင်သန်များနှင့် ကျင်အတန်းအစားခွဲခြားပုံ
(၃) ကျင်သန်ကြီး။ ။ ကျင်ပညာရည်ပြည့်ဝပြီး ကျင်ပွဲများစွာကိုင်ဖူးပြီး ပွဲအတွိအကြုံရင့်ကျက်သည့် အားခွန်ဗလပြည့်စုံသည့် ကျင်သန်၊ ရွှေမောင်း၊ ငွေမောင်း အကြိမ်ကြိမ်ရဖူးသည့်ကျင်သန်မျိုးကို ကျင်သန်ကြီးဟု ခေါ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရွှေမောင်းတန်း (အကြီးတန်း) မှ ရွှေမောင်းရကျင်သန်ကြီးများကို ခေါ်သည်။
(၄) ပြည်ကျင်သန်ကြီး။ ။ ပြည်ကျင်သန်ကြီးဆိုသည်မှာ ကျင်လောက၏ အထွတ်အထိတ်ဂုဏ်ပုဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်ဒေသအနှံ့က ပွဲတိုင်းလိုလို၌ ရွှေမောင်းမြောက်များစွာရဟိထားပြီး၊ ပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်သော ကျင်သန်ကြီး၊ အင်အားနှင့်ပညာရပ်၌ အံ့မခန်းလောက်အောင် ထူးချွန်ပြည့်စုံပြီး လေးစားချီးကျူးထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ပြည်ကျင်သန်ကြီးအဖြစ် ပြည်သူရို့နှုတ်ဖျားမှ ကင်းပွန်းတပ်ပီးသည့် ဘွဲ့ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ဆုံး ပြိုင်စံယှား ကျင်ပညာသျှင်များဖြစ်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ခ) ကျင်အတန်းအစားခွဲခြားပုံ
ရှိအစဉ်အလာအရ ကျင်ပွဲကို ရွှေမောင်းတန်း၊ ငွေမောင်းတန်း အတန်းနှစ်မျိုးခွဲခြားကျင်းပသည်။ ရွှေမောင်းတန်းမှာ ရွှေမောင်းဆု၊ ငွေမောင်းတန်းမှာ ငွေမောင်းဆု ချီးမြှင့်သည်။ ရွှေမောင်းတန်း၌ နိုင်မောင်း (ပထမဆု)၊ ကျမောင်း (ဒုတိယ) ပီးသကဲ့သို့ ငွေမောင်းတန်း၌ ထိုသို့ချီးမြှင့်သည်။ ငွေမောင်းတန်း၌ ပွဲမြောက်များစွာကိုင်ဖူးပြီး ငွေမောင်း (ပထမဆု) အကြိမ်ကြိမ်ရဖူးကာ ကျင်အတွိအကြုံရင့်ကျက်သူ၊ အားအင်လည်းပြည့်စုံသူကို ရွှေမောင်းကျင်သန်အဖြစ် တန်းတင်၍တိုက်တတ်သည်။ ရွှေမောင်းတန်းကျင်သန်မှာ ငွေမောင်းတန်း၌ဆင်းကိုင်ခွင့်မဟိ။ ငွေမောင်းတန်း၌ တက်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကိုင်နိုင်ခွင့်ဟိသည်။
ကနိ ရခိုင်ပြည်၏ အထင်ကရကျင်ပွဲကြီးတချို့ ၌ ကျင်ကိုခေတ်နှင့်အညီတိုးတက်အောင် တီထွင်ကြံဆကျင်းပလာပြီးဖြစ်သည်။ မိမိအသက်အရွယ်အလိုက် ကြီးငယ်မရွီး ကျင်သန်တိုင်း ကျင်ကိုင်ခွင့်ရစီရန်စီစဉ်ပြီး ကျင်အတန်းအစားများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားကျင်းပလာသည်။
1. သက်ကြီးတန်း (ကျင်အိုတန်း)
2. အကြီးတန်း (ပထမတန်း)
3. အလတ်တန်း (ဒုတိယတန်း)
4. အငယ်တန်း (တတိယတန်း)
မမျှော်လင့်ပဲ မတန်တတန် ယှုံးနိမ့်လားရသည့်ကျင်သန်များ၊ မပြတ်သားအယှုံးပီးလားရသည့် ကျင်သန်များ၊ ပရိသတ်အကြိုက် (သို့မဟုတ်) ကျင်ကော်မတီများအကြိုက် ကျန်သန်များကိုလည်း (မောင်းမရပဲ ယှုံးလားရသည့်ကျင်သန်ထဲမှ) ရွီးထုတ်ပြီး တိုက်ပီးသည့် စိန်ခေါ်မောင်း (စိန်ခေါ်ပွဲ) သို့မဟုတ် (ကြည့်ချင်ပွဲ) ဟူ၍လည်း စီစဉ်ကျင်းပပီးတတ်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (က) ကျင်ကိုင်ပုံ ယျေဘုယသဘော
ကျင်ကိုင်သည်ကို ကျင်လုံးသည်ဟုလည်းဆိုသည်။ ကျင်ကိုင်၊ ကျင်လုံးရန်အတွက် ကျင်သန်နှစ်ဦး ဟိရမည်။ ကျင်သန်နှစ်ဦး ကျင်ကိုင်သည်ကို ကျင်တပူး (သို့) ကျင်တည်းတတည်း (သို့) ကျင်တွဲတတွဲအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ကျင်တည်း ကျင်ကိုင်ရန်အတွက် (အဖမ်း) နှင့် (အခံ) ကို ရွီးချယ်ပီးရသည်။ ကျင်သန်တဦးကဖမ်းပြီး ကျန်တဦးက ခံပီးရသည်။ ကျင်ဖမ်းသူကို အဖမ်းသား (သို့) အဖမ်းကျင်သန်(သို့) အဖမ်းလူဟုခေါ်ပြီး ကျင်ခံပီးသည့်သူကို အခံသား(သို့) အခံကျင်သန် (သို့) အဖမ်းလူဟုခေါ်သည်။ ဖမ်းလှည့်ကိုရသော ကျင်သန်က လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ကားကာ စဖမ်းရပြီး၊ အခံလှည့်ကျသည့်ကျင်သန်က လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို နံဘေးမှာကပ်၍ လက်ဖျားပိုင်းကို ရှိသို့တောင့်တောင့်ပီးထားကာ ကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်ဦးတည့်ပြီး သတိဖြင့်ခံပီးရသည်။
အခံသားခြီနှစ်ဖက်ကိုလည်း ပြိုင်မရပ်ဘဲ ရှိနောက်ဟန်ချက်ညီညီ ထားပြီးခံရသည်။ အဖမ်းသားကစပြီး လှန်၊ ဖက်၊ ဆွဲ၊ ဖမ်း၊ ပေါက်၊ ချိတ်၊ လိမ်၊ ကျစ်နိုင်သည်။ ကျင်ခြင်း၊ ကျင်ကွက်ဖြင့်ပစ်ချနိုင်သည်။ ထိုသို့ အဖမ်းသားက ဆွဲ၊ ဖမ်း၊ လှန်၊ ဖမ်း၊ ပေါက်၊ ချိတ်၊ လိမ်၊ ကျစ်ရန် ကြိုးစားလာသည့်အခါ ပစ်ချလာသည့်အခါ တချိန်တည်းတပြိုင်တည်းမှာ အခံကျင်သန်ကလည်း ဖြုတ်၊ ဆီး၊ ကာ၊ ချွတ်၊ တိုး၊ ကန်၊ ရုန်း၊ ထွက်၊ ကာခွင့်ဟိသည်။ ပြန်လည်ပစ်ချခွင့်ဟိသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ခ) ကျင်တည်းပုံ၊ ကျင်တိုက်ပုံ ယျေဘုယျသဘော
ကျင်သန်နှစ်ဦး ကျင်တတည်းစီးတွဲပြီးနောက် “ကျင်တလင်း” (သို့) “ကျင်ကွင်း” ထဲ၌ ကျင်တိုက်ရသည်။ “ကျင်တည်း” များကို “ကျင်တည်းအဖွဲ့” (ကျင်စာရင်းထိန်းကော်မတီ) ကတည်းပီးပြီး၊ ၎င်းကျင်တည်းများကို ကျင်ကွင်းထဲသို့ ကျင်ကိုင်ဖို့လာရောက်ပါရန် “ပြန်ကြားရေးကော်မတီ” ကဖိတ်ခေါ်ပီးရသည်။ ကျင်သန်နှစ်ဦးစလုံးရောက်ဟိက ၎င်းကျင်တည်းကို “ကျင်ဒိုင်အဖွဲ့” ထဲမှ ကျင်ဒိုင်နှစ်ဦးတာဝန်ယူကြီးကြပ်ပြီး ကျင်တိုက်ရသည်။
တာဝန်ယူကြီးကြပ်မည့် ကျင်ဒိုင်နှစ်ဦးစီကို ကျင်တွဲနှင့်တွဲဖက်၍ “ကျင်တည်းအဖွဲ့က” နာမည်ကြော်ငြာပီးရသည်။ ကျင်တလင်းအကျယ်အဝန်း၊ ကြီးကြပ်ကျင်ဒိုင် အရွီအတွက်အပေါ်မူတည်၍ ကျင်တည်းများကို တတည်းကနီ၊ လေး၊ ငါးတည်းထိ တပြိုင်တည်းတိုက်နိုင်သည်။ ကျင်တလင်း၌ ကျင်ဒိုင်အဖွဲ့က ကြီးကြပ်သည်။ တချို့ပွဲ၌ “ကျင်ဒိုင်ချုပ်” ဟူ၍ သီးသန့်ထားပီးသည်။ သက်ဆိုင်ရာကျင်ဒိုင်နှစ်ဦးက ကျင်တည်းကို အဖမ်းအခံသတ်မှတ်ပီးရသည်။ ကျင်တတည်း၏အယှုံးအနိုင်ကို ကြီးကြပ်ကွင်း ကျင်ဒိုင်များ၏အဆုံးအဖြတ်ဖြင့်မကြေနပ်ပါက “ကျင်ခုံသမာဓိအဖွဲ့” (ကျင်အကဲဖြတ်လူကြီးအဖွဲ့) ထံ စောဒကဝင်တင်ပြနိုင်သည်။ ကျင်ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နောက်ဆုံးအပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ဂ) ကျင်တတည်း၏ကျင်ကိုင်ပုံအဆင့်ဆင့်
ကျင်တတည်း၏ကျင်ကိုင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အနှစ်ချုပ်သာဖော်ပြပါမည်။ အဖမ်းသားက အခံသားကို ခြီတကြိမ် ပေါက်၊ ချိတ်၊ လိမ်၊ ကျစ်၍ အခံသားမကျပဲ ရုန်းလွတ်လားပါက အဖမ်းတခေါက်ပြီးလားပြီးနောက် တကြိမ်ထပ်ဖမ်းရသည်။ နောက်တကြိမ်လည်း အဖမ်းသားက ခြီတင်၊ ပေါက်ချိတ်၊ လိမ်ကျစ်ပစ်၍ အခံသားမြီပေါ်မကျပဲ လွတ်လားပါက အဖမ်းနှစ်ခေါက် ပြီးလားပြီဖြစ်သည်။ နှစ်ခေါက်ရာ ခြီတင်ပစ်ခွင့်ဟိပြီး အခံသားက ပြန်ဖမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကျင်တည်းတတည်း၏အယှုံးအနိုင်သတ်မှတ်ပုံကို အောက်တွင် ဇယားဖြင်ဖော်ပြထားသည်။
အဖမ်းတခေါက်၊ အခံတခေါက်စီ သူတလှည့်ကျနီပြီး အယှုံးအနိုင်မရဖြစ်နီပါက “အဖမ်း၊ အခံ” ကိုပြန်၍ “အသစ်တဖန် မျောက်ပန်းလှန်ပီး၍ ဖမ်းသူမှာ ခြီတခေါက်ရာ ပေါက်ချိတ်၊ လိမ်ဖမ်းခွင့်ပြုရပါသည်။ ကျသူကို အယှုံးပီးရသည်။ လုံးဝအယှုံး၊ အနိုင်မရပါက အယှုံးအနိုင်ကို မျောက်ပန်းလှန်၍ ဖြစ်စီ၊ မဲဖြင့်ဖြစ်စီ ဆုံဖြတ်နိုင်သည်။
ကျင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိရို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆုံးဖြတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်အတွင်းမှနီ၍ ပြည့်ပြည့်ဝဝကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရသည်။ ကျင်ပွဲ၌ ဖွဲ့စည်းရမည့် လုပ်ငန်းကောမတီများမှာ --
1. ကျင်ခုံသမာဓိအဖွဲ့ (ကျင်အကဲဖြတ်လူကြီးအဖွဲ့)
3. ကျင်တည်းအဖွဲ့ (ကျင်စာရင်းထိန်းအဖွဲ့)
5. ကျင်ဇေပြား ရောင်းချရေးအဖွဲ့
6. ကျင်ဇေပြားကို (ဆုငွေ) ပြန်ပီးရောင်းချရေးအဖွဲ့
8. ကျင်တလင်း၊ ကျင်မဏ္ဍပ်ပျင်ဆင်ရေးအဖွဲ့
10. ကျင်သန်များဆုခံစဉ် လိုက်ပါကူညီရေးအဖွဲ့
12. စာရင်းထိန်း၊ စာရင်းစစ်အဖွဲ့….
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ခ) ကျင်ဒိုင်အဖွဲ့၏တာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ္တရားများ
[ပြင်ဆင်ရန်​] ၁။ တာဝန်များ
1. ကျင်ဒိုင်များသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာကျင်တည်းများကို ကျင်တလင်းသို့ ခေါ်ယူပြီး ခါးစည်းကြိုးကို မှန်ကန်စနစ်တကျနှောင်စီးရမည်။ ဘောင်းဘီဖြင့်ကျင်ကိုင်းခြင်းကို တားမြစ်ရမည်။
2. အန္တရာယ်ဖြစ်စီနိုင်သည့် လက်ဝတ်ထည်များကို ဝတ်ဆင်ထားသည့်ကျင်သန်ကို ယင်းလက်ဝတ်ထည်အား ချွတ်ထားဖို့ပြောရမည်။ လက်သည်းရှည်ကျင်သန်များကို ချက်ချင်းလှီးဖြတ်စီရမည်။
3. ကျင်သန်နှစ်ဦးအတူ ပရိသတ်ကို ရှိခိုးအရိုအသေပြုပြီးမှ ကျင်ကွင်းထဲသို့ဝင်စီရမည်။
4. ကျင်သန်နှစ်ဦးကို ဒေါသမပါဘဲ၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးမှ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ကျင်ကိုင်စီရမည်။
5. ကျင်သန်နှစ်ဦး ဖမ်းလှည့်၊ ခံလှည့်ကို စည်းကမ်းအတိုင်း စီစည်ဆုံးဖြတ်ပီးရမည်။
6. ကြီးကြပ်ကျင်ကိုင်ဒိုင်နှစ်ဦးသည် မိမိရို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာကျင်တည်းကို မျက်ခြီမပြတ် စိစပ်သေချာစောင့်ကြည့်နီရမည်။ ထိုင်မနီရ။ တနီရာတည်း၌ ရပ်မနီရ။ ကျင်းတည်းနှင့်အတူ လိုက်ပါလှုပ်လျှားနီရသည်။
7. ကျင်သန်နှစ်ဦး အဖမ်းအခံကို အငြင်းပွားပါက သက်ဆိုင်ရာကျင်ဒိုင်နှစ်ဦးက ဆုံးဖြတ်ပီးရမည်၊ တွန်းပစ်ချမှုမျိုးမဖြစ်ရအောင် သက်ဆိုင်ရာကျင်ဒိုင်နှစ်ဦးက ကြီးကြပ်နိုင်သည်။
8. ကျင်သန်နှစ်ဦး သတ်မှတ်ကျင်တလင်းနီရာ၌သာ ကျင်ကိုင်နိုင်စီရန်နှင့် လူထုထဲ (သို့) စည်းအပြင်သို့ တွန်းချမှုမျိုးမဖြစ်စီရအောင် သက်ဆိုင်ရာကျင်ဒိုင်နှစ်ဦးက ကြီးကြပ်နိုင်ရမည်။
9. ကျင်တလင်းသည် စည်းအပြင်ဘက် လူထုထဲသို့ပစ်ချခြင်း။ ကြိုးဝိုင်းစည်းပေါ်၌ ပစ်ချခြင်းမျိုးကြောင့် ကျင်သန်တဦးကျလဲလားပါက အယှုံး၊ အနိုင်၊ မပီးပဲ ပြန်ကိုင်စီရမည်။
10. ကျင်သန်တဦးဦး ကျင်ကိုင်၍ တကြိမ်ပြီးသဖြင့် အနားယူခွင့်တောင်းပါက ပီးသင့်က ပီးရမည်။ တကြိမ်မှာ (၁၅) မနစ်ထက် ပိုအနားယူခွင့်မပီးရ။
11. ကျင်သန်တဦးဦး ကျင်ကိုင်နီစဉ် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုဟိပါက သတိပီးတားမြစ်ရမည်၊ ထုတ်ပယ်သင့်သည်ထင်မြင်က ကျင်သမာဓိထံ တင်ပြအတည်ပြုချက်ယူရမည်။
12. ကျင်ဒိုင်သည် ကျင်တတည်းတိုက်ပြီးတိုင်း အယှုံးအနိုင်ကို ကျင်တည်းအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်တင်ပြပီးရမည်။
13. ကျင်တွဲများကို ကျင်ကွင်းအနီအထားကိုကြည့်ပြီး ထုတ်တိုက်ရမည်။ ကျင်တည်းမများစီရ။
14. ကျင်ကွင်း၌ ကျင်တည်းမပြတ်စီရန်လည်း ဂရုစိုက်ရမည်။
15. ကျင်သန်များ ကျင်ကွင်းပြလိုက စီစဉ်ပီးရမည်။
16. ကျင်သန်များသည် ကျင်ပွဲမစမီကပင် ကျင်တလင်း၌ အဆင်သင့်ဟိနီရမည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] ၂။ ကျင်ဝတ္တရားများ
1. ကျင်ဒိုင်များသည် ကျင်တည်းတတည်း၏အယှုံးအနိုင်ကို ချက်ချင်းမှန်ကန်တိကျ ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ပီးနိုင်ရမည်။ ကျင်ဒိုင်နှစ်ဦးစလုံး ဆုံဖြတ်ချက်မှန်ရပါမည်။
2. ကျင်သန်များ ကျင်ကိုင်နီစဉ်ဖြစ်စီ။ အနားယူနီစဉ်ဖြစ်စီ တဦးတဖက်ကိုမျှ အားပီးအမြှောက်ပြောခြင်း၊ အကြံပီးခြင်း လုံးဝမလုပ်သင့်။
3. ကျင်သန်တဦးဦး ကျင်နိုင်သည့်အခါ ဝမ်းသာအားရလက်ခုပ်တီးခြင်း၊ ထပြီးကျင်ကွင်းခြင်းများ လုံးဝမလုပ်သင့်။
4. အဖမ်းကျင်သန်က အခံကျင်သန်၏ခါးကို ကိုင်ဖက်ထမ်းထားလျှင် အဖမ်းသားကို လွှဲပစ်မချစီရန် ချက်ချင်းတားပြီး အခံသားကိုအကျပီးရမည်။ အခံသားအကျမခံလိုက ပစ်ချခွင့်ပြုရမည်။
5. ကျင်ဒိုင်များသည် ကျင်ကိုင်နည်းပညာ၊ ကျင်ကိုင်းခြင်းစုံစုံလင်လင်ကို နှံ့စပ်အောင်သိထားရမည်။
6. ကျင်ဒိုင်အတွိအကြုံရင့်ကျက်အောင် ကြိုးစားရမည်။
7. ကျင်စည်းကမ်းများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိထားရမည်။
8. ဘက်လိုက်မှု လုံးဝကင်းယှင်းပြီး သမာသမတ်ကျရမည်။
9. ကျင်သန်များနှင့် ကျင်ပွဲကာလ၌ ရောရောနှောနှောမနီသင့်။
10. လာဘ်ပီးလာဘ်ယူ လုံးဝကင်းယှင်းရမည်။
11. ကျင်ဒိုင်များ ဆီးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း လုံးဝယှောင်ကြည်ရမည်။
12. ကျင်ဒိုင်များ သက်လုံကောင်စီရန် လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်သင့်သည်။
13. ကျင်သန်းများအပေါ်၌ ကြောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲ စိတ်ထားစေတနာမှန်ရမည်။
14. ကျင်တိုက်နီချိန် ကျင်ဒိုင်အချင်းချင်းဖြစ်စီ၊ တခြားသူများနှင့်ဖြစ်စီ စကားပြောမနီသင့်။
15. ကျင်ဒိုင်ဝတ်စုံစနစ်တကျ၍ ဝတ်ဆင်ကြီးကြပ်သင့်သည်။
ကျင်ပွဲကို ကွင်းအဖွင့်ရတုဆို၍ မင်္ဂလာစည်တော်များတီးခတ်ကာဖွင့်လှစ်သည်။ ကျင်းကွင်းကို နံ့သာရည်များပက်ဖြန်းရသည်။ ကျင်တည်း (ကျင်တွဲ) များကို စမတင်မှီ မင်္ဂလာကျင်တည်းများကို စ၍တိုက်လေ့ဟိသည်။ ကျင်တိုက်ရာ၌ ကျင်စည်တီးပီးရသည်။ ကျင်စမတိုက်မှီ စာရင်းဝင်ကျင်သန်များ ကျင်ကွင်းထဲ၌ ကျင်ကွင်းပြရသည်။ ကျင်ကိုင်၍ ကျင်တတည်းနိုင်သူကို “နှစ်ခေါက်နိုင်” ဟု သတ်မှတ်သည်။ နှစ်တည်းနိုင်ပါက လေးခေါက်နိုင်။ သုံတည်းနိုင်ပါက ခြောက်ခေါက်နိုင်စသည်ဖြင့် မောင်းလုပွဲ၊ ဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင်ထိ ဆက်နိုင်လားရသည်။
ကျင်တတည်း အယှုံးအနိုင်ပြီးတိုင်း ပရိသတ်ထံ ယှုံးသူရော၊ နိုင်သူပါ ဆုခံယူရသည်။ ခုံသမာဓိလူကြီးအဖွဲ့က စတင်ပြီး “ပန်းဆုငွေ” ချီးမြှင့်ပီးရသည်။ ကျင်ပွဲကျင်းပပြီးခါနီး၌ ကျင်ဒိုင်အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရေးကျင်ကိုင်ရသည်။ ကျင်သန်များကျင်နိုင်သည့်အခါ ကျင်ကွင်းပြရသည်။ ကျင်သန်များ နောက်ဆုံးဗိုလ်ဆွဲမောင်းရသည့်အခါလည်း ကွင်းထဲပတ်၍ ကျင်ကွင်းပြ၍ ကျင်ပွဲကြည့်ပရိသတ်များသည် ကျင်ဇေပြားများဝယ်ယူပြီး ကျင်သန်များဆုခံစဉ် ကျင်းကွင်းပြစဉ်၌ ဆုချီးမြှင့်ပီးရသည်။ ငွေသားလည်း ဆုချီးမြှင့်ပီးနိုင်သည်။ ကျင်သန်များက မဏ္ဍပ်တွင်းပရိသတ်ထံမှ ဆုချီးမြှင့်မှုခံယူပြီး ရလာသည့်ကျင်ဇေပြားများကို ကျင်ဇေပြားဖိုး ဆုငွေပြန်ပီးချေရေးအဖွဲ့ထံ၌ ဇေပြားနှင့်ငွေ ဖလှယ်ယူရသည်။ “ကျင်ခုံသမာဓိအဖွဲ့” က ကျင်ဒိုင်များထံမှတင်ပြလာသည့် ကျင်သန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် တင်ပြချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပီးရသည်။
ကျင်းပွဲကျင်းပရာ အငယ်တန်း၊ အလတ်တန်းစသည့် အောင်တန်းမှ ကျင်သန်များကို စတင်တိုက်ရပြီး ရွှေမောင်းတန်း (ပထမတန်း/အကြီးတန်း) ကျင်သန်များကို ပွဲတော်နောက်ဆုံးရက်များ၌ရာ တိုက်လေ့ဟိသည်။ ကျင်တည်းများကို ယှုံးဖြုတ်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသော်လည်း ယခုအခါ တချို့ပွဲများ၌ ကျင်သန်ဦးရေနည်းသော ရွှေမောင်းတန်း (ပထမတန်း/အကြီးတန်း) ကျင်သန်ကြီးများကို ပရိသတ်က အားရပါးရကြည့်ရှုနိုင်စီရန် ပတ်လည်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည်လည်းဟိသည်။
ကျင်သန်များသည် ကျင်းကွင်းထဲ ကျင်ကွင်းပြရာတွင် ကျင်ပွဲအသီးသီးမှ မိမိရဟိထားသော ရွှေ၊ ငွေ ဆုတံဆိပ်များကို လိုင်တွင်ဆွဲ၍ ကျင်ကွင်းပြရသည်။ ရှိဦးစွာ မိမိ၏ကျင်ကွင်းနည်းပြဆရာများကို ကန်တော့ရသည်။ ကျင်ခုံသမာဓိ လူကြီးအဖွဲ့ကို ဂါရဝပြုရသည်။ နောက်ပရိသတ်ဘက်သို့လှည့်၍ ဂါရဝပြုရသည်။ ပြီးမှ ကွင်းတပတ်လှည့်၍ ကျင်ကွင်းပြရသည်။ ကျင်ကွင်းနည်းအမျိုးမျိုးဟိသည်။ အောင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (က) ဝံ့လက်သဲ (သို့) ၀ံလက်သစ်ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် မားမားမတ်မတ်ရပ်လိုက်သည်။ တည်ကြည်သောမျက်နှာထားဖြင့် မိမိလက်နှစ်ဖက်ကို လက်အုပ်ချီးပူးကပ်ထားလိုက်သည်။ နဖူးပေါ်တွင်ကပ်၍ တဖြည်းတဖြည်း ဝဲယာသို့ဆန့်တန်းထားသည်။ လက်နှစ်ချောင်းအနီအထားမှာ ငှက်တောင်များ ဖြန့်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
လက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်သို့ ဆတ်ခနန်း မြှောက်ချီလိုက်သည်။ ပြီးနောက် တနီရာသို့ လွှားကနန်း ခုန်လိုက်သည်။ နောက်တနီရာသို့ရောက်သည်နှင့် ဘယ်-ညာလက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် ဘယ်-ညာပေါင်ပေါ်ရိုက်ခတ်လိုက်သည်။ ထို့သို့ ရိုက်ခတ်ပြီးနောက် ငှက်ဝံလက်ပျံသကဲ့သို့ လက်များကို ဘယ်-ညာဆန့်တန်းဝှေ့ယမ်းသည်။
သို့ဖြင့် တနီရာမှတနီရာသို့ လှည့်လည်ပြီး ကွင်းတပတ်ပြည့်အောင် ကျင်ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ခ) ကျီကန်းရီချိုး ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် ကိုယ်ကိုမားမားမတ်မတ်ရပ်လိုက်သည်။ ကိုယ်ဟန်အနီထားဖြင့် ကြံ့ခိုင်မှုကို ပြထားသည်။ လက်နှစ်ချောင်းကိုပူးကာ နဖူးပေါ်တွင်ကပ်၍ တဖြည်းဖြည်း ဝဲ-ယာသို့ ဆန့်တန်းထားလိုက်သည်။ ဒူးကို ကုပ်နီဟန်ထားခန္ဓာကိုယ်ကို ထက်အောက်သို့ နှိမ့်ချီမြင့်ချီ ပြုလုပ်ပြသည်။ ကျီးကန်းရီချိုးသကဲ့သို့ မြင်ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ တနီရာမှ တနီရာသို့ပြောင်းရွှိပြီး လှည့်လည်ကျင်ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ဂ) ဥဒေါင်းဝဲ ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် ရှိဦးစွာ ခြီထောက်ကိုစုံရပ်၍ ကိုယ်ကိုမားမားမတ်မတ်ရပ်၍ ဂါရဝပြုလိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို လက်ဦးချီ၍ နဖူးပေါ်တင်ကာ တဖြည်းဖြည်း ဝဲ-ယာသို့ ဆန့်တန်းလာသည်။ ခြီထောက်တချောင်းကို မ,မြှင့်၍ ဘယ်-ညာများကို ဦးက္ခောင်းပေါ်တွင် ဝဲကာနွဲ့ကာ ကွင်းပြသည်။ တနီမှ တနီရာသို့ပြောင်းရွှိ၍ ကွင်းတပတ်လည်အောင် ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ဃ) လင်းကွက် ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ရို့အား ဂါရဝပြုလိုက်သည်။ ပြီးနောက် လက်ဝါးနှစ်ဖက်နှင့် ပေါင်ကို တချက်စီရိုက်ခတ်လိုက်သည်။ ကိုယ်ဟန်အနီအထားကို နွဲ့နှောင်းထားကာ လက်များကိုကွေ့ဝိုက်၍ လင်းကွက်ငှက်ပျံသည့်အလား ဝှေ့ယမ်းကာ ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (င) လက်ခမောင်းခတ် ကွင်းးနည်း
ကျင်သန်သည် ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ပရိသတ်အား ဂါရဝပြုသည်။ ခုံသမာဓိ အဖွဲ့ရှိရပ်ပြီး ဘယ်လက်ဝါးကို ညာဘက်ချိုင်းအောက်သို့ သွင်းလိုက်သည်။ ညာဘက်လက်မောင်းကို နံဘေးနှင့် “ဖြောင်းဖြောင်း” မြည်အောင်ရိုက်ခတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်နှစ်ဖက်ကို ၉၀ံ ခန့် ကွေး၍ တဖြည်းဖြည်းဆန့်တန်းလာသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်သို့ ဆတ်ကနန်းမြှင့်တင်ပြီး တနီရာသို့ပြီးလွှားကာ နီရာပြောင်းရွှိလိုက်သည်။ ယင်းမှ တနီရာသို့ပြီးလွှား၍ တပတ်ပြည့်အောင် ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (စ) ကင်းမြီးကောက် ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် ရှိဦးစွာ ခုံသမာဓိလူကြီးများနှင့် ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကို ဂါရဝပြုသည်။ ထို့နောက် လက်နှစ်ဘက်ကို မြီတွင်ထောက်၍ ကင်းမြီးကောက်ထောင်လိုက်သည်။ ကင်းမြီးကောက်ထောင်၍ ဆယ်လှမ်းခန့်လားပြီး ဂျွန်းပြန်ကာ ရပ်စောက်ရပ်လိုက်သည်။ လက်များကိုပူး၍ ရင်ဘတ်နားတွင်ထားကာ တဖြည်းဖြည်း ဝဲ-ယာသို့ဆန့်တန်းလာသည်။ ထို့နောက် နီရာပြောင်းလိုက်ပြီး ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြန်၍ ဆယ်လှမ်းခန့် ဆက်လားပြန်သည်။ ပြီးမှ ဂျွမ်းပြန်ကာ ရပ်စောက်ရပ်သည်။ ထိုသို့ကွင်းတပတ် ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ဆ) နောက်ဂျွမ်းပစ် ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် ရှိဦးစွာ ခုံသမာဓိလူကြီးများနှင့် ပွဲကြည့်ပရိသတ်များကို ဂါရဝပြုသည်။ ပြီးနောက် ကျားကဲ့သို့ နောက်ဂျွမ်းပစ်ချလိုက်သည်။ နောက်ဂျွမ်းတချက်ပစ်လိုက်၊ လက်များကို ကွေးကာကွေးကာ ဝဲ-ယာ၊ ရှိ-နောက် ခန္ဓာကိုယ်ကို လှည့်လည်ကွင်းပြသည်။ ဤသို့ဖြင့် တနီရာမှ တနီရာသို့လှည့်လည်၍ ကွင်းပြသောအခါ နောက်ဂျွမ်းတချက်မှ ငါးချက်ထိ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ပစ်ပြီး နီရာပြောင်းသည်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်က “ကျားလာရေ-ကျားလာရေ” ဟူ၍ ကြွေးကြော်ချီးမြှင့်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ဇ) ရှိဂျွမ်းပစ် ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် ခုံသမာဓိလူကြီးများနှင့် ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကို ရှိဦးစွာဂါရဝပြုပြီး ကျားကဲ့သို့ လျှင်မြန်စွာ ရှိဂျွမ်းပစ်လိုက်သည်။ ဂျွမ်းပစ်ပြီး လျှင်မြန်စွာ လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းကာ စွန်များပျံဝဲသကဲ့သို့ ဝဲယာရှိနောက်လှည့်လည်၍ ကွင်းပြသည်။ ပြီးနောက် ရှိဂျွမ်းသုံးပြန်ပစ်၍ နီရာပြောင်းသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းတပတ်ပြည့် ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ဈ) သိန်းငှက် ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် ရှိဦးစွာ မားမားမတ်မတ်ရပ်နီရာမှ ဂါရဝပြုလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ဝဲ-ယာ လက်နှစ်ဖက်ကို ကွေးဝိုက်ပြီး ဆန့်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ကိုယ်ကို နွဲ့နွဲ့ညွတ်၍ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ရိုက်ခတ်လိုက်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို သိန်းငှက်ဝဲပျံသကဲ့သို့ မာန်ဖြင့်ကွေးဝိုက်ကာ နောက်တနီရာသို့ အဟုန်ဖြင့် ရွှိပြောင်းလှည့်ပတ်ကာ ပြန်ရပ်ပြီး ပေါင်ကို လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် ရိုက်ခတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ခြီတချောင်းကို အနည်းငယ်ကွေးမြှောက်ကာ သိန်းငှက်တောင်ဖံဝဲပျံနီပုံ လက်နှစ်ဖက်ကိုကွေးဖြန့်ဝိုက်ပြီး ကွင်းပြသည်။ ထိုသို့ ကွင်းတပတ်လှည့်ပတ် ကွင်းပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] (ည) ကြိုးကြာပျံ ကွင်းနည်း
ကျင်သန်သည် မားမားမတ်ရပ်ပြီး ကျင်ခုံသမာဓိလူကြီးများ၊ ပရိသတ်များကို ဦးညွတ်ဂါရဝပြုလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ခြီကိုစုံရပ်၍ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ ဆန့်ထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်ကို အထက်အောက် မြင့်ချီနိမ့်ချီပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ကာ နီရာပြောင်း ကွင်းပြသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကွင်းဟန်မှာ ကြိုးကြာငှက်ပျံနီစဉ် တောင်ဖံနိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နီဟန် မြင်ရသည်။ ထို့သို့ ကွင်းတပတ်ပြည့်အောင် ကွင်းပြသည်။ --Mayor mt 06:42, 1 ဇွန် 2009 (UTC)
1. ↑ (လေးဝတီ ခိုင်ကျော်)
ဘုရားရှင်သည် ဘုရားအဖြစ်ရောက်ရှိပြီး တစ်နှစ်မြောက်သည့်အချိန်တွင် မွေးရာဇာတိ ကပိလ၀တ်နေပြည်တော်သို့ ကြွရောက်သီတင်းသုံးတော်မူပါတယ်။ တစ်ရက်တွင် ယသော်ဓရာမိဘုရားက သားတော်ရာဟုလာကို ဘုရားရှင်ထံ အမွေတောင်းခိုင်းပါသည်။ သားတော်ရာဟုလာမှ ဘုရားရှင်ထံအမွေတောင်းသည့် အခါတွင် ဘုရားရှင်က " သာရိပုတ္တရာ ရာဟုလာကို ရှင်ပြုပေးလိုက်ပါလို့ စေခိုင်းတော်မူပါသည်။ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးမှ မည်သို့ရှင်ပြုပေးရမလဲဟု မေးလျှောက်တဲ့အခါ ဘုရားရှင်က ရဟန်းအပေါင်းကို စုဝေးစေပြီး "ရဟန်းတို့ သရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ ရှင်သာမဏေပြုပေးဖို့ ငါဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါတယ်လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
အသက်တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်သူကိုသာ ရှင်ပြုပေးရန် ဘုရားရှင်မှ မိန့်ဆိုတော်မူကြောင်း ၀ိနည်းမဟာဝါပါဠိတော်တွင်ပါရှိပါသည်။ သို့ရာတွင်မိဘများကွယ်လွန်သွားသဖြင့် ခိုကိုးရာမဲ့နေသော ကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုသာသနာ့ဘောင်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းချင်၍ ညီတော်အာနန္ဒာမထေရ်က ဘုရားရှင်ထံသို့လျှောက်ထားသောအခါ အသက်တစ်ဆယ့် ငါးနှစ်မပြည့်သေးသော်လည်း မိမိရှေ့တွင်ချထားသောဆွမ်းကို ကျီးမလာအောင် ခြောက်လှန့်နိုင်ခဲ့လျှင် ဒီသူငယ်ကို ရှင်ပြုပေးနိုင်တယ်လို့ ထပ်ဆင့်သတ်မှတ်တော် မူခဲ့ပါတယ်။
အဓိကလုပ်ငန်းကြီး (၃) ရပ်
မောင်ရှင်လောင်း ဦးခေါင်းမှ ဆံပင်ကိုရိတ်သည့်အခါ အိမ်မှာကတည်းက ရိတ်လို့ ရပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျောင်းတွင်ရိတ်ပါက ကျောင်းတိုက်တွင်းရှိ သံဃာတော်များကို ဆံရိတ်မည့်အကြောင်းခွင့်ပန်ကြားပြီးမှ ရိတ်ရမည်ဟု ရွှေပန်းတိမ်သည်သားအား အကြောင်းပြု၍ ဘုရားရှင်မှ ၀ိနည်းနှင့် ပညတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
သင်္ကန်းဆီးခြင်း၊ သင်္ကန်းတောင်းခြင်း၊ သင်္ကန်းဝတ်ခြင်း ဟုလုပ်ငန်းသုံးရခုရှိပါသည်။ ပါဠိနှင့်စိမ်းနေလျှင် မြန်မာဘာသာနှင့်ရွတ်ဆိုခြင်း၊ အာရုံပြုခြင်းတို့ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ရှင်လောင်းမှ ဥပဇ္ဈယ်ဆရာဘုန်းကြီး ရှေ့တွင်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး မိမိဝတ်မည့်သင်္ကန်းကို လက်အုပ်ချီပြီး သင်္ကန်းကပ်ရာတွင် "အရှင်ဘုရား အလုံးစုံသော သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငှာ တပည့်တော်၏ လက်၌ရှိသော ဤသင်္ကန်းကို ယူတော်မူ၍ တပည့်တော်အား သနားစောင့်ရှောက်ချီးမြှင့်သောအားဖြင့် ရှင်သာမဏေ ပြုလုပ်ပေးတော်မူပါ ဘုရား" ဟုဆိုပြီး သင်္ကန်းကို ဆရာလက်အပ်ရပါသည်။
သင်္ကန်းတောင်းရာတွင် "အရှင်ဘုရား အလုံးစုံသော သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗန်ကို မျက်မှောက်ပြုပါရခြင်း အကျိုးငှာ အရှင်ဘုရား၏ လက်၌ရှိသော ထိုသင်္ကန်းကို ပေးတော်မူ၍ တပည့်တော်ကို သနားစောက်ရှောက် ချီးမြှင့်သောအားဖြင့် ရှင်သာမဏေပြုပေးတော်မူပါဘုရား" ဟုဆိုရပါမည်။
သရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းသည် ရှင်ပြုမင်္ဂလာတစ်ခုလုံး၏ ပဓာနအကျဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သရဏဂုံသည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ ပန္နက်လည်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမံ္မသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဟုဆိုအပ်သော သရဏဂုံ (၃) ပါးကို ဆရာဘုန်းကြီးနှင့် တပည့်မောင်ရှင်လောင်းတို့သည် ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျ ပီပီသသဖြင့် ရွတ်ဆိုပြီး ဆုံးသွားလျှင် ရှင်သာမဏေစစ်စစ် ဖြစ်သွားပါသည်။
ရှင်ပြုမင်္ဂလာဆင်နွှဲသည့်အခါတွင် (၁) ရှင်သာမဏေစစ်စစ်ဖြစ်ရန် ၊ (၂) ရှင်သာမဏေ စစ်စစ်ဖြစ်ပြီးလျှင်လည်း ဆယ်ပါးသီလ၊ လိင်ဆယ်ပါး၊ ဒဏ်ဆယ်ပါး၊ သေခိယ-၇၅ပါး၊ ခန္ဓက၀တ် (၁၄) ပါးစသော ရှင်ကျင့်ဝတ်ကို သိရှိလိုက်နာရွတ်ဆိုနိုင်ရန် မောင်ရှင်လောင်းအား ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ အနည်းဆုံး ရက်သတ္တပတ် တပတ်ကြိုတင်ပို့ကာ သင်ကြားသင့်ပါသည်။ မိဘများမှ အမွန်အမြတ်ထားပြီး ရှင်ပြုပေးခြင်းကို အနှစ်သာရရှိသည့် သာသနာပြုရှင်ပြုဖြစ်ရန် ရှင်သာမဏေတိုင်းမှ ရှင်ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရပါမည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာတို့၏ အစဉ်အလာ ဓလေ့တစ်ခုမှာ သားရှင်ပြုရာတွင် အိတ်သွန်ဖာမှောက် အောတိုက်၍ လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ ငွေအင်အားထက် ကျော်လွန်၍ သားငယ်ကို မင်းမြောက်တန်ဆာ ဆင်မြန်းပေးကာ အဘိသိက်သွန်း၍ မြင့်ဖြင့်လှည့်ခြင်း၊ မြို့များ၌ မော်တော်ကားဖြင့်လှည့်လည်ခြင်း၊ လူအမြောက်အမြား ဖိတ်ကြားပြီး ကျွေးမွေးခြင်း၊ မဏ္ဍပ် ဆောက်၍ ဆိုင်းဝိုင်း, အဆိုတော် တို့ဖြင့် ဧည့်ခံခြင်း၊ အသံချဲ့စက်ငှားရမ်း၍ တစ်ရပ်ကွက်လုံး ဆူညံသွားအောင် သီချင်းများဖွင့်ခြင်း၊ ပဓါနအလှူထက် ပကာသနအမှုတို့ဖြင့် ငွေသုံးဖြုန်းခြင်း စသည်တို့ကို ကောင်းသည် လိုအပ်သည်ထင်၍ သူ့ထက်ငါ မသာရင်တောင် မနိမ့်ကျအောင်လုပ်မည်ဟု အားခဲကာ လုပ်ဆောင်နေကြ၏။အချို့လယ်သမားတို့က လှည်းကိုရောင်း၊ နွားကိုရောင်း၊ လယ်ကို ပေါင်နှံကာ ရှင်ပြုအလှူကို ပြုလုပ်ကြသဖြင့် လယ်လုပ် ကိရိယာများလည်းသုဉ်း၊ လယ်ပေါင်လည်းဆုံးရှုံး၍ ကြွေတင်ကျွန်ဖြစ်ရသည့် အခြေသို့ ဆိုက်ရောက်ကြရသည်။ လွတ်လပ်ရေး မရမီက ချစ်တီးကုလား သူဌေးတို့ထံ သမီးပါအပ်နှံ၍ ကျွန်အဖြစ်ခံခဲ့ကြရသည်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ သင်ကြပါသည်။ သာရှင်ပြုခြင်းနှင့် လှူဒါန်းခြင်းတို့သည် သီးခြားကိစ္စနှစ်ရပ် ဖြစ်သည်ကို သဘောပေါက်ထားသင့်ပါသည်။
၁။ ရှင်ပြုခြင်းသည် မိမိသားငယ်အား သာသနာ့အမွေကိုခံယူစေပြီး ရှင်သာမဏေတို့၏ သီလနှင့် ကျင့်ဝတ်ကို စောင့်ထိန်းစေခြင်းဖြင့် သီလသာသနာကို ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ လှူဒါန်းခြင်းသည် ပစ္စုပ္ပန်တမလွန် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ရည်မှန်း၍ ဒါနသာသနာကို ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရှင်ပြုခြင်းက ပဓါန၊ လှူဒါန်းခြင်းက သာမည” ရှင်ပြုခြင်းသည် ဒါနပြုခြင်းထက် အဆများစွာပို၍ သာလွန်မြင့်မြတ်သည်။ရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့ တင်မြှောက်ရာတွင် သရဏဂုံကို ပီပီသသ မရွတ်ဆိုတတ်လျှင် ရှင်မဖြစ်ပါ၊ ရှင်ဝတ်ပြီးနောက် ရှင်ကျင့်ဝတ်များ နှင့်အညီ လေးလေးစားစား မနေထိုင်လျှင်လည်း အကျိုးကျေးဇူးမကြီးပါ။ ရှင်ပြုခြင်းကိစ္စ အောင်မြင်ပေါက် မြောက်ရန်အတွက်-
(၁) ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကောင်းထံ ချဉ်းကပ်၍ ဩ၀ါဒခံယူခြင်း၊
(၂) သင်္ကန်းတောင်း၊ လိင်ဒဏ်၊ သေခိယ၊ ပစ္စဝေက္ခဏာ၊ ခန္ဓက၀တ် တို့ကို သင်ယူပြီး သရဏဂုံ ပီပီသသ ရွတ်ဆိုတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားခြင်း၊
(၃) သင်္ကန်း၊ သပိတ်၊ ပရိက္ခရာ တို့ကို ဓမ္မကံနှင့် လျော်ညီအောင် ၀ယ်ခြမ်း စီမံထားခြင်း တို့ကို ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားသင့်သည်။
သင်္ကန်းပရိက္ခရာ ၀ယ်ခြမ်းခြင်းသည် မွန်မြတ်သည့် ဒါနကောင်းမှု ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ပြုရာတွင် ဤဒါနကောင်းမှုသာလျှင် ပဓါနလိုအပ်ပါသည်။ သင်္ကန်းပရိက္ခရာသစ်အတွက် ငွေကြေးမတတ်နိုင်လျှင်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ငွေတတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ထံမှ သင်္ကန်းပရိက္ခရာအဟောင်းများကို ရယူနိုင်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် မိမိ၏ တစ်ဦးတည်းသော ရင်သွေးဖြစ်သည့် ရာဟုလာကို ရှင်သာမဏေပြုစေရာတွင် မည်သည့်အလှူအတန်း ပကာသနကိုမျှ မပြုလုပ်ချေ။ အရှင်သာရိပုတ္တရာက ရာဟုလာ၏ ဦးခေါင်းကို ရိတ်၍ သာမေဏ၀တ်ပေးခြင်းဖြင့် ရှင်ပြုခြင်းကိစ္စ ပြီးစီးသွားပေတော့သည်။ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသက “အနာဂတ် သာသနာရေး” စာအုပ်တွင် “သားရှင်ပြု အလှူမင်္ဂလာပြုပြင်ရေး” အကြောင်းကို ဤသို့ ရေးသားထား၏-
“သားရှင်ပြုကိစ္စ၌ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းတို့ကို ဖိတ်၍ ကျွေးမွေးလေ့ရှိကြ၏။ ထိုလူကြီးလူကောင်းတို့သည် ထိုကဲ့သို့ အစားအစာကို စားနေကျဖြစ်၏။ အလှူရှင်က ဖိတ်လို့သာ အားနာ၍ (မသွားကောင်းသဖြင့်) သွားရသည်။ မိမိအိမ်မှာ (ရုံးမှာ) အလုပ်ကိစ္စတန်းလန်းနှင့် မအားလပ်ကြ။ ကျွေးမွေးရာ၌ ကုန်သော ငွေလည်း မနည်းလှ၊ စားရသူတို့ကလည်း အားနာပါးနာနှင့် မလွှဲသာလို့ လာကြရာဝယ် အဘယ်မှာ ကုသိုလ်ထုပ်ကြီး ရနိုင်ပါမည်နည်း။ ထိုအပေါ်မှာ ဂုဏ်ဖော်ချင်သော (ပကာသနအကုသိုလ် လောဘစိတ် ကလေး) ပါလိုက်ချေသေး၏။“ဘုန်းကြီးပင့်ရာမှာလည်း ပင့်ရိုးပင့်စဉ်မပါလျှင် မကောင်းသော ဘုန်းကြီးပေါင်း များစွာကိုပင့်ရပြန်၏။ ထိုဘုန်းကြီးများသည် ပရိယတ် ပဋိပတ် အလုပ်ပျက်ကြရ၏။ နောက်ပါကျောင်းသားတို့လည်း စာသင် ပျက်ကြရ၏။ သို့ဖြစ်၍ ရာပေါင်းထောင်သောင်းများစွာ အကုန်အကျခံ၍ ပြုကြရသော သားရှင်ပြု သမီးနားသ အလှူဒါနကြီးသည် အဘယ်နည်းဖြင့် သာသနာကို အားပေးရာရောက်တော့မည်နည်း။ “အလှူဒါယကာတစ်ယောက်သည် ကူငွေများကို မျှော်လင့်ပြီး အလှူကြီးကို ခမ်းခမ်းနားနား မွမ်းမံပြင်ဆင်၍ထား၏။ ကုန်ငွေနှင့် အကူရသောငွေမှာ မျှော်လင့်ချက်အတိုငိ်း ဖြစ်မလာသောအခါ တရားကိုပင် ဖြောင့်ဖြောင့်မနာနိုင်အောင် ဖြစ်သွား၏ ။ “ပရိတ်ရွတ်တာကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားနိုင်၊ ဟောပြောသောတရား ကိုလည်း အာရုံမပြုနိုင်တော့ဘဲ စိတ်တွေ ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတော့၏။ တရားဆုံးလို့ ဆုံးမှန်းမသိ၊ ဘေးလူတွေက အမျှဝေလိုက် အမျှဝေလိုက်လို့ ပြောသည့်အခါ သတိရပြီး ကပျာကယာ “သောက်ကျိုးနည်းပါပြီးဗျို့” လို့ နှုတ်က ထွက်သွားရှာသတဲ့။” အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးကလည်း “ယမမင်းထံ အစစ်ခံသံပေါက်” ထဲတွင် သားရှင်ပြုအလှူနှင့်ပတ်သက်၍ ဤသို့ကောက်ချက်ချပြထား၏-
၁။ သားကြီးရှင်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်စစ်၊ ညှစ်၍လှူခံတယ်။
၂။ ကွမ်း, ဆေး, လက်ဖက်၊ ဆီစက်စက်၊ ၀တ်နှင့် ကြက်သား ကျွေးခဲ့တယ်။
၃။ သည်ကိုဟိုကို၊ ကြွပါဆို၊ ဗျိုဗျာမစဲ ခေါ်ခဲ့တယ်။
၄။ ကျွန်တော်အလှူ၊ ကြွေးတွေပူ၊ ငွေကူရဘိ မျှော်မိတယ်။
၅။ ကူငွေနှင့်သာ၊ ငါလှူတာ၊ ထေမိပါရင် တော်ရော့မယ်။
၆။ ပရိက္ခရာ၊ ညံ့လှစွာ၊ ဖိုးချိုတာမှဝယ်လှူတယ်။
ပဓါနဖြစ်သည့်ပရိက္ခရာတွင် ငွေချိုထား၍ ပကာသနဖြစ်သည့် ၀တ်သားကြက်သားတွင် ငွေစရံကြိုပေး၍ မှာကြသည်။ အသားပေါ်သူ တို့ကလည်း အလှူရက်ရောက်မှ ၀က်ကြက်တို့ကို လောလောလတ်လတ်သတ်ဖြတ်ပြီး အသားကို လာပို့သည်။ ကုသိုလ်က တစ်ပဲ ငရဲက တစ်ပိဿာဟု ဆိုရမည့် မိဿက အလှူမျိုးဖြစ်သည်။ အလှူရက်ပြီးသောအခါ၌လည်း ကြွေးတင်ကျန်ရစ်သဖြင့် စိတ်ညစ်ဆင်းရဲကာ ပရစေတနာ ပျက်ရတော့သည်။ သို့အတွက် ပုဗ္ဗ, မုဉ္စ, ပရဟူသော စေတနာသုံးတန် အင်္ဂါမစုံလင်သည့်အတွက် အလှူ အကျိုးမှာ မဖွံ့ဖြိုး မကြီးကျယ်တော့ချေ။ လက်ငင်းဘ၀၌ပင် ကြွေးတင်ကျွန် ဖြစ်ခံရ၍ အရှုံးကြီးဆုံးရှုံးရပါတော့သည်။ “ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ” ဟူသည်နှင့်အညီ မှားယွင်းသည့် အစဉ်အလာကို ဖယ်ရှား၍ အကျိုးများမည့် အစဉ် အလာသစ်ကို ထူထောင်သင့်ကြပါသတည်း။ 
[ပြင်ဆင်ရန်​] ရဟန်းသာမဏေများ သင်ကြား လေ့ကျင့်ရမည့်တရားများမှ ၇၅-မျိုး
၁-၂။ သင်းပိုင်(ခါးဝတ်)ကို ချက်ဖေါ်ပြီးမ၀တ်ရ၊ ချက်ဖုံးစေရမည်။ သင်းပိုင်၏ အောက်အနားသည် ဒူးဆစ်အောက် လက်ရှစ်သစ်ကျစေ၍ ရှေ့နောက်နိမ့်မြင့် ညီညာဝန်းဝိုင်းနေစေရမည်။ ဧကသီ(အပေါ်ရုံ)၏ အောက် အနားသည် ဒူးဆစ်အောက် လက်လေးသစ်ကျစေ၍ ရှေ့နောက်နိမ့်မြင့် ညီညာဝန်းဝိုင်း နေစေရမည်။
* ခြွင်းချက်။ ။ညီညာစွာ ၀တ်ရုံပါလျက် မညီမညာ ဖြစ်သွားလျှင် လည်းကောင်း၊ မညီမညာဖြစ်နေသည်ကို အမှတ်တမဲ့ သတိမထားမိလျှင်လည်းကောင်း၊ ခြေသလုံးတွင် အနာရှိ၍ တိုတိုဝတ်ခြင်း၊ ရှည်ရှည်ဝတ်ခြင်း ပြုလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပြေးလွှားရလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ စိတ်မနှံ့ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း မညီမညာ တို ရှည် ၀တ်ရုံခြင်းကြောင့် အာပတ်မသင့်ချေ။
၃-၄။ မြို့ရွာအတွင်း၌ သွားလာနေထိုင်သည့်အခါ၊ ဆွမ်းခံ၊ ဆွမ်းစား၊ တရားဟောသည့်အခါတို့၌ လည်ပင်း နှင့် လက်ကောက်ဝတ်တို့ကို လုံခြုံစွာဖုံး၍ သင်္ကန်းရုံထား ရမည်။
* ခြွင်းချက်။ ။မြို့ရွာအတွင်း ခေတ္တတည်းခို နေထိုင်သည့်အခါ သင်္ကန်းမရုံဘဲ နေခွင့်ရှိသည်။
၅-၆။ မြို့ရွာအတွင်း သွားလာရာ၌ ဣနြေ္ဒမရ လက်ကိုလှုပ်ရမ်း၍သွားခြင်း၊ နေထိုင်ရာ၌ လက်ခြေတို့ကို လှုပ်ရမ်းခြင်းမပြုရ။ ဣနြေ္ဒရရ သွားလာနေထိုင်ရမည်။
၇-၈။ မြို့ရွာအတွင်း၌ ရှေ့သို့ လေးတောင်ခန့် ကြည့်လျက် မျက်လွှာချ၍ သွားလာနေထိုင်မှုပြုရမည်။ သို့သော် ယာဉ် ရထား နွား မြင်း စသော ဘေးရန်ရှိ မရှိကိုကား တစေ့ တစောင်း ကြည့်နိုင်သည်။
၉-၁၀။ ဧကသီ သို့မဟုတ် သင်းပိုင်ကို မလျက်၊ မြှောက်ပင့်လျက် မြို့ရွာတွင်းသို့ မသွားရ မနေထိုင်ရ။
၁၁-၁၂။ အသံကြယ်စွာ ရယ်မောလျက် မြို့ရွာတွင်း၌ သွားလာ နေထိုင်ခြင်းမပြုရ။
၁၃-၁၄။ မြို့ရွာတွင်းသွားလာစဉ် စကားကို တိုးတိုး ပြောရမည်။ တိုးတိုးအသံဆိုသည်မှာ ရဟန်းတော်သုံးပါး ခြောက်တောင်စီခွာ၍ တန်းစီထိုင်နေသောအခါ တစ်ဖက် စွန်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်က အလယ်ပုဂ္ဂိုလ်အား လှမ်း၍စကားပြော ရာ၌ အလယ်ပုဂ္ဂိုလ်သာ စကားလုံးကို ကွဲကွဲပြားပြား ကြားရ၍ အခြားတစ်ဖက်စွန်းပုဂ္ဂိုလ်က ကွဲကွဲပြားပြား မကြားရလျှင် တိုးသောအသံဖြစ်၏။ ဆယ့်နှစ်တောင်ကွာ တစ်ဖက်စွန်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ ကွဲကွဲပြားပြားကြားရလျှင် ကျယ်သောအသံဖြစ်သည်။
၁၅-၂၀။ မြို့ရွာအတွင်း၌ ကိုယ်ကို လှုပ်ရမ်း၍ လည်းကောင်း၊ လက်ရုံးလက်မောင်းကို လှုပ်ရမ်း၍ လည်းကောင်း၊ ဦးခေါင်းကို လှုပ်ရမ်း၍လည်းကောင်း မသွားလာရ မနေထိုင်ရ။ ကိုယ်အထက်ပိုင်းသည် ကျောက်ဆင်းတုကဲ့သို့ မလှုပ်မရှက် ငြိမ်သက်စွာ ရှိရမည်။
၂၁-၂၂။ ခါးထောက်လျက် မြို့ရွာတွင်းသို့ မသွားရ မနေထိုင်ရ။
၂၃-၂၄။ ဦးခေါင်းခြုံလျက် မြို့ရွာတွင်းသို့ မသွားရ မနေထိုင်ရ။
၂၅။ ဖနောင့်ကိုမြှောက် ခြေဖျားထောက်လျက် လည်း ကောင်း၊ ခြေဖျားကိုမြှောက် နောင့်ထောက်လျက် လည်း ကောင်း မြို့ရွာတွင်းသို့ မသွားရ။
၂၆။ မြို့ရွာတွင်း၌ ထိုင်သည့်အခါ ဒူးနှစ်လုံးထောင်လျက် ပုဆိုးကွင်းသိုင်း၍လည်းကောင်း၊ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဒူး နှစ်လုံးကို သိုင်းဖက်၍လည်းကောင်း မထိုင်ရ။
* (ဤ ၂၆-ပါးမှာ [သမဏသာရုပ္ပ] ကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်အောင် သွားလာနေထိုင်နည်းကိုပြသည်။)
၂၇။ ဆွမ်းခံရာ၌ သပိတ်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပိုက်ထားပြီး လေးလေးစားစား လိုလိုချင်ချင် ခံယူရမည်။ မလိုချင်သလို သွန်ပစ်တော့မည့် အမူအရာဖြင့် ဆွမ်း မခံရ။
၂၈။ သပိတ်၌စိတ်စိုက်လျက် ဆွမ်းခံရမည်။
၂၉။ ဆွမ်းကိုနည်းနည်းခံယူပြီး ဟင်းကို ဆွမ်းထက် နှစ်ဆသုံးဆ ခံယူခြင်း မပြုရ။ ဆွမ်းနှင့်ဟင်း မျှတရုံသာ ခံယူရမည်။
၃၀။ သပိတ်အတွင်း နှုတ်ခမ်းအရစ်နှင့် ညီမျှရုံသာ ဆွမ်းကိုခံယူရမည်။
၃၁။ ဆွမ်းစားသည့်အခါ မစားချင့်စားချင် အမူအရာ မရှိရ၊ လေးလေးစားစား ဆွမ်းကိုစားရမည်။
၃၂။ ဆွမ်းစားနေစဉ် တောင်တောင်မြောက်မြောက် မကြည့်ရ၊ မိမိသပိတ်၌သာ စိတ်အာရုံစိုက်ထား၍ စားရမည်။
၃၃။ ဆွမ်းစားရာ၌ ဆွမ်းနှင့်ဟင်းကို တစ်ပိုင်းခြင်း အစဉ်အတိုင်း ယူ၍စားရမည်။ တစ်ဖက်စွန်းကိုယူပြီး အခြားတစ်ဖက်စွန်းကို မယူရ၊ အလယ်မှထွင်းဖေါက် မယူရ။
၃၄။ မပြစ်မကျဲ လက်ဖြင့်ကော်ယူ၍ ရလောက်သော ပဲဟင်းကို ဆွမ်း၏ လေးပုံတစ်ပုံလောက်သာ ထည့်၍ စားရမည်။ ဆွမ်းနည်းနည်း ဟင်းများများစားခြင်း မပြုရ။
၃၅။ ဆွမ်းကို အလယ်ဗဟိုတွင် မို့မောက်အောင်စုပုံပြီး၊ ဆွမ်းဦးထိပ်မှ ယူမစားရ။ ဘေးမှအစဉ်အတိုင်း ယူ၍စား ရမည်၊ သို့ရာတွင် ဆွမ်းစားပြီးခါနီး သပိတ်ထဲ၌ အနည်းငယ် ကျန်နေသည်ကို သိမ်းကျုံးစုဆောင်းလိုက် သောအခါ အစုအပုံ မိုမိုမောက်မောက်ဖြစ်နေတတ်သေး ၏၊ ထိုအစုအပုံကို နှိုက်ယူစားရာ၌ကား အာပတ်မသင့်။
၃၆။ ဆွမ်းဟင်းထပ်ပြီးရလို၍ ဟင်းကို ဆွမ်းဖြင့်ဖုံးအုပ် ထားခြင်း မပြုရ။
၃၇။ ဆွမ်းဟင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဆွမ်းကိုလည်းကောင်း ဖျားနာသူ (ဂိလာန)မဟုတ်လျှင် မိမိအတွက်တောင်း၍ မစားရ။ ဆွေမျိုးတော်သူ ဖိတ်မန်ထားသူတို့အထံ၌ တောင်းကောင်း၏။
၃၈။ ကဲ့ရဲ့လိုသောစိတ်ဖြင့် သူတစ်ပါး သပိတ်ကိုမကြည့်ရ။ ဆွမ်းနည်းလျှင်ပေးမည်။ ဆွမ်းများလျှင်တောင်းမည် ဟူသော စိတ်ဖြင့် ကြည့်ကောင်း၏။
၃၉။ ဆွမ်းလုတ်ကို ဒေါင်းဥပမာဏလောက် မကြီးစေရ။
၄၀။ ဆွမ်းလုတ်ကို ရှည်လျှားမနေစေဘဲ ထက်ဝန်းကျင် ၀န်းဝိုင်းအောင်ပြု၍ စားရမည်။
၄၁။ ခံတွင်းပေါက်သို့ ဆွမ်းလုတ်မရောက်သေးမီ ခံတွင်း ပေါက်ကို ကြိုတင်၍ ဖွင့်မထားရ။
၄၂။ ဆွမ်းစားစဉ် လက်ချောင်းများကို ခံတွင်းထဲသို့ မသွင်းရ။
၄၃။ စကားမပီသလောက်အောင် ခံတွင်းထဲ၌ ဆွမ်းလုတ် ရှိနေစဉ် စကားမပြောရ။
၄၄။ ဆွမ်းလုတ်ဆွမ်းခဲကို ပါးစပ်ထဲသို့ ပစ်ပေါက်မသွင်းရ။
၄၅။ ဆွမ်းလုတ်ကို တစ်ဝက်ကိုက်ဖြတ်မစားရ။ ဆွမ်း လုတ်ကြီးနေလျှင် လက်ဖြင့်ခွဲ၍ စားရမည်။ မုန့်ပဲ စသောခဲဖွယ်ကို ကိုက်ဖြတ်စားနိုင်သည်။
၄၆။ ဆွမ်းလုတ်ကို ပါးစောင်မှာထား၍ ပါးကိုဖောင်းစေ ပြီး မစားရ။
၄၇။ လက်ကို ခါ၍ ခါ၍ ဆွမ်းမစားရ။ လက်၌ ဆွမ်း ဟင်းများကပ်နေလျှင် လက်ချောင်းဖြင့်သာ ခြစ်၍ ဖယ်၍ ချရမည်။
၄၈။ ဆွမ်းလုတ်ကို ခံတွင်းထဲသို့ သွင်းပြီးနောက် လက်ထဲ၌ ဆွမ်းလုံးများကျန်နေသည်ကို အသာအယာ လက်ဖြင့် ပြန်သယ်ဆောင်လာပြီး ပန်းကန်ထဲ သပိတ်ထဲ ချရမည်။
၄၉။ ဆွမ်းစားလျှင် လျှာကိုခံတွင်းအပြင်သို့ ထုတ်ပြီး မစားရ။
၅၀။ ဆွမ်းစားသည့်အခါ ပါးစပ်မှ အသံမည်အောင် မစားရ။
၅၁။ ဟင်းရည်ပူပူ အရည်သောက်သည့်အခါ ရှုးရှုးရှဲရှဲ အသံမမည်အောင် သောက်ရမည်။
၅၂။ ဆွမ်းစားသည့်အခါ လက်ချောင်းများကို လျက်ခြင်း စုပ်ခြင်း လက်ဝါးကို လျက်ခြင်းမပြုရ။ ယာဂုပြစ်ပြစ်၊ တင်လဲ၊ ပျားရည်စသည်တို့ကို လက်ချောင်းဖြင့်ကော်ယူ ပြီး စားရာ၌ လက်ချောင်းကို သွင်းပြီးစုပ်ယူနိုင်သည်။
၅၃။ သပိတ် ပန်းကန်စသည်ကို ခြစ်ခြုတ်၍မစားရ။ အသံမမည်အောင် လက်ဖြင့်သိမ်းယူ၍ စားရမည်။
၅၄။ ဆွမ်းစားစဉ် နှုတ်ခမ်းကို လျှာဖြင့်မလျက်ရ၊ တစ်စုံတစ်ခုကပ်နေပါက နှုတ်ခမ်းအချင်းချင်းဖိပြီး ပါးစပ်အတွင်းသွင်းရမည်။
၅၅။ ဆွမ်းဟင်းပေကျံသောလက်ဖြင့် မိမိပိုင် သောက်ရေ ခွက်ကိုပင်ဖြစ်စေ မကိုင်ရ၊ ကိုင်ပြီးလျှင် ဆေးကြောမည် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကိုင်လျှင် ကိုင်ကောင်း၏။
၅၆။ ဆွမ်းလုံးပါသော သပိတ်ဆေးရေကို မြို့ရွာတွင်း၌ မသွန်ရ။ မြို့ရွာအပြင်အပ၌ သွန်ကောင်း၏။ ဆွမ်းလုံး ကို တစ်နေရာတွင်စု၍ ရေချည်းသက်သက်ဖြစ်စေ၊ ဆွမ်းလုံးပျက်အောင်ချေ၍ဖြစ်စေ သွန်ကောင်း၏။
၅၇။ လက်၌ထီးရှိသော မနာမဖျားသူအား တရားမဟောရ။
၅၈။ တုတ် လှံ လက်၌ရှိသော မနာမဖျားသူအား တရားမဟောရ။
၅၉။ ဓား သံလျက် လက်၌ရှိသော မနာမဖျားသူအား တရားမဟောရ။
၆၀။ လေး မြှား လက်၌ရှိသော မနာမဖျားသူအား တရားမဟောရ။
၆၁။ ကျန်းမာပါလျက် ခြေနင်းစီးထားသူအား တရား မဟောရ။
၆၂။ ကျန်းမာပါလျက် ဖိနပ်စီးထားသူအား တရား မဟောရ။
၆၃။ ကျန်းမာပါလျက် ယာဉ်ပေါ်၌နေသူအား တရား မဟောရ။
၆၄။ ကျန်းမာပါလျက် အိပ်ယာထဲနေသူအား တရား မဟောရ။
၆၅။ ဒူးနှစ်ဖက်ကိုထောင်လျက် အ၀တ်ဖြင့်သိုင်းထားသူ၊ လက်ဖြင့်သိုင်းဖက်ထိုင်နေသူအား တရားမဟောရ။
၆၆။ ကျန်းမာပါလျက် ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းထားသူအား တရားမဟောရ။
၆၇။ ကျန်းမာပါလျက် ဦးခေါင်းခြုံထားသူအား တရား မဟောရ။
၆၈။ တရားဟောသူသည် အခင်းမပါ ဗလာမြေပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး၊ မနာမဖျားဘဲ အ၀တ်ခင်းပေါ် ထိုင်သူအား တရားမဟောရ။
၆၉။ မနာမဖျားဘဲ မြင့်ရာ၌နေသူအား မိမိကနိမ့်ရာ၌ နေ၍ တရားမဟောရ။
၇၀။ မနာမဖျားဘဲ ထိုင်နေသူအား မတ်တတ်ရပ်နေသူက တရားမဟောရ။
၇၁။ မနာမဖျားဘဲ ရှေ့ကသွားနေသူအား နောက်ကနေ၍ တရားမဟောရ။
၇၂။ မနာမဖျားဘဲ လမ်းပေါ်၌သွားနေသူအား လမ်းဘေး မှ လိုက်၍ တရားမဟောရ။
၇၃။ မနာမဖျားဘဲ မတ်တတ်ရပ်လျက် ကျင်ကြီး ကျင်ငယ် မစွန့်ရ။
၇၄။ မနာမဖျားဘဲ စိမ်းစိုရာမြက်သစ်ပင်၌ ကျင်ကြီး ကျင်ငယ် တံထွေး မစွန့်ရ။
၇၅။ မနာမဖျားဘဲ (သောက်ရေ သုံးရေ-မြစ် ကန် ချောင်း) ရေ၌ ကျင်ကြီးကျင်ငယ် မစွန့်ရ။
* ဤသိက္ခာပုဒ် ၇၅-ပါးကို မရိုသေ မလေးစား ဂရုမစိုက်သည့်သဘောဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုပါက ရဟန်းများမှာ ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်သည်။ ရှင်သာမဏေများမှာ သဲဒဏ် ရေဒဏ်ထိုက်သည်။ (မကျန်းမာလျှင်၊ မသိနားမလည်သေးလျှင်၊ အပြစ်မရှိ။) နားလည်အောင် သိအောင် သင်ကြားလေ့ကျင့်ရမည်။
* ဤသိက္ခာပုဒ်တော်အားလုံး ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများအား အကြောင်းပြု၍ ပညတ်တော်မူသည်။--Mayor mt 06:55, 13 ဇူ​လိုင်​ 2009 (UTC)
1. ↑ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ(ရွှေကျင်) ၏ ရုပ်ပုံရှင်ကျင့်ဝတ်
2. ↑ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် “မြတ်ဒါန” စာအုပ်
ရဟန်းဟူသည် - တရားကို ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း ၊ မှန်စွာကျင့်ခြင်း ၊ ကုသိုလ်ပြုခြင်းသည် ကောင်း၏၊ကောင်းမှုပြုခြင်းသည် ကောင်း၏၊ မညှင်းဆဲခြင်းသည်ကောင်း၏၊ သတ္တ၀ါတို့ကို သနားခြင်းသည် ကောင်း၏ ဟု နှလုံးသွင်း ကျင့်နေသူ ဖြစ်သည်။ 
သာမဏေရ ပဗ္ဗဇ္ဖ လို့ အခေါ်ပြောင်းလိုက်လျှင် - လွတ်မြောက်အောင်ကျင့်နေသူ ၊ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းသူ၊ (တဏှာကင်းအောင် ကြိုးစားနေသူ ) ဖိအားကင်းအောင်နေသူ၊ ငြိမ်းချမ်းအောင်နေသူဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းဘ၀နှင့် စပ်၍ ရဟန်းရှစ်မျိုးရှိကြောင်းကို ဦးစွာသိအပ်ပေ၏။
၁။ ဧဟိဘိက္ခူပသမ္ပဒါ-ဗုဒ္ဓက ရဟန်း လာလော့-ဟုခေါ်ကာမျှဖြင့် ဖြစ်လာရသော ရဟန်း။( အရှင်သာရိပုတ္တရာ စသည် )
၂။ သရဏဂမနူပသမ္ပဒါ-သရဏဂုံ ဆောက်တည်ကာမျှဖြင့် ဖြစ်လာသောရဟန်း။( ဘုရားဖြစ်ခါစ ရှေးပိုင်းရဟန်းများ )
၃။ သြ၀ါဒပဋိဂ္ဂဟဏူပသမ္ပဒါ-ဗုဒ္ဓ၏ သြ၀ါဒကို ခံယူကာမျှဖြင့် ဖြစ်လာသော ရဟန်း။( အရှင်မဟာကဿပ )
၄။ ပဥှာဗျာကရဏူပသမ္ပဒါ-ပြဿနာ ဖြေဆိုကာမျှဖြင့်ဖြစ်လာသောရဟန်း။( အရှင်သောပါက )
၅။ အဋ္ဌဂရုဓမ္မ ပဋိဂ္ဂဟဏူပသမ္ပဒါ-ဂရုဓမ်ရှစ်ပါး ခံယူကာမျှဖြင့် ဖြစ်လာသော ရဟန်း။( အရှင်မ မဟာပဇာပတိဂေါတမီ )
၆။ ဒူတေနူပသမ္ပဒါ-တဆင့်ခံ တမန်ဖြစ်လာသော ရဟန်း။( အရှင်မ အဍ္ဎကာသီ )
၇။ အဋ္ဌ၀ါစီကူပသမ္ပဒါ-ရဟန်း၊ ရဟန်းမ၊ နှစ်ဖက်သံဃာမှ ဉတ္တိစတုတ္ထကံ နှစ်မျိုးဖြင့် ဖြစ်လာသော ရဟန်း။( အခြားရဟန်းမများ )
( ၈ ) ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မူပသမ္ပဒါ-ဉတ္တိစတုတ္ထကံဖြင့် ဖြစ်လာသော ရဟန်း။( အရှင်ရာဓ-မှစ၍ မျက်မှောက်ခေတ်အထိ ရဟန်းများ )
ထို ၈-မျိုးတို့တွင် ၁၊ ၃ ၊ ၄၊ ၅ တို့သည် ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ရဟန်းပြုပေးသော ရဟန်း အမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြသည်။
* ၇-သည် ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်မှစ၍ ဘိက္ခူနီသာသနာမကွယ်မီ အချိန်အထိ ရှိသော ဘိက္ခူနီ ( ရဟန်းမ) အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
* ၂-သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူသောအချိန်မှစ၍ ထိုနှစ် တပေါင်းလ ( အရှင်ရာဓ ရဟန်းမပြုမီ အချိန် ) အထိ ခွင့်ပြုအပ်သော ရဟန်းအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
* ၈-သည် အရှင်ရာဓ ရဟန်းပြုချိန်မှစ၍ ယနေ့အထိ တည်ရှိနေသော ရဟန်းအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ် သာသနာတော်၌ ဉတ္တိစတုတ္ထကံဖြင့်သာ ရဟန်းပြုခွင့် ရှိတော့၏။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိရဟန်းတော်မှန်သမျှ အမှတ် ၈-အမျိုးအစား ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မူပသမ္ပဒါ ရဟန်းများချည်း ဖြစ်ကြသည်။
ရဟန်းတပါး ဖြစ်မြောက်ရန် ဉတ္တိစတုတ္ထကံကို နည်းလမ်းတကျ အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်၏။ ယင်းသို့ ဉတ္တိစတုတ္ထကံ အောင်မြင်ရန်- ၁။ ၀တ္ထု-ရဟန်းလောင်း။
၂။ ဉတ္တိ-ဉတ်။ ( ကမ္မ၀ါစာ နိဒါန်း )
၅။ ပရိသာ-ပရိသတ်။ ( ကံဆောင်သံဃာ ) ( ၀တ်-ဉတ်-သိမ်-ကံ၊ ပရိသာ၊ ငါးဖြာ သမ္ပတ္တိ ။)
ဟူသော အင်္ဂါငါးပါး ညီညွတ်ပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်၏။
ယင်းငါးပါး ညီညွတ်ပြည့်စုံမှ ဉတ္တိစတုတ္ထကံ အောင်မြင်၍ ရဟန်းဖြစ်နိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ( သိက္ခာတင် ပဉ္စင်္ဂ ) ဟု ဆိုကြသည်။ သိက္ခာတင်-( ရဟန်းခံ) ရာ၌ အင်္ဂါငါးပါး ရှိ၏ဟု ဆိုလိုသည်။
ထိုတွင် ၀တ္ထုအရ ရဟန်းလောင်းသည် ယောက်ျားစစ် ဖြစ်ရခြင်း၊
တိတ္ထိ ( ဒိဋ္ဌိအယူရှိသူ ) မဟုတ်ရခြင်း၊
ပဉ္စာနန္တရိယ ကံကြီးများ ကျူးလွန်ထားသူ မဟုတ်ခြင်း-စသော အင်္ဂါတို့နှင့် ညီညွတ်သူ ဖြစ်ရ၏။
ဉတ္တိအနုဿာဝနတို့အရ ဉတ်ကမ္မ၀ါစာကို ဌာန်၊ ကရိုဏ်း၊ ပယတ်၊ သိထိလ၊ ဓနိတ ပီသစွာ မှန်မှန်ကန်ကန် ရွတ်ဖတ်နိုင်ရ၏။
သီမာ-အရ သိမ်သည် အောင်အောင်မြင်မြင် သမုတ်ခဲ့သော သိမ်ကောင်းဖြစ်ရ၏။
ပရိသာ-အရ ကံဆောင်သံဃာသည် အနည်းဆုံး ရဟန်းစစ်စစ် ငါးပါးရှိရ၏။
( မဇ္ဈိမဒေသဖြစ်လျှင် ၁၀-ပါးရှိရ၏။ ယင်းသံဃာတော်များက စုပေါင်းညီညာ ဆောင်ရွက်ကြရ၏။ )
၁။ ရဟန်းလောင်း သာမဏေကို ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော်ထံ ဥပဇ္ဈာယ်ယူစေရ၏၊ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာဟူသည် သာသနာတော်၌ မိဘပင်ဖြစ်၏၊ အစစအရာရာ တာဝန်ယူရသော တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တည်း။ ဥပဇ္ဈာယ်ရှိသူကိုသာ ရဟန်းခံပေးနိုင်၏။
၂။ သပိတ် သင်္ကန်း ပြောကြားရ၏၊ ကိုယ်ပိုင် သပိတ် သင်္ကန်း ရှိသူကိုသာ ရဟန်းခံပေးနိုင်၍ ကိုယ်ပိုင် သပိတ် သင်္ကန်းရှိကြောင်း ပြောကြားရခြင်း ဖြစ်သည်။
၃။ ရဟန်းလောင်းအား သံဃာ့အလယ်၌ မေးစိစစ်သောအခါ ဖြေဆိုနိုင်ရန် သမ္မုတိရ သံဃာတော်တပါးက သံဃာ့ပရိသတ်မှ နှစ်တောင့်ထွာ (ဟတ္တပါသ်) လွတ်ရာ တနေရာသို့ ထုတ်ဆောင်၍ သင်ပြပေးရ၏။
၄။ ထိုသို့ သွန်သင်ပြပေးပြီးနောက် သံဃာ့အလယ်သို့ ပြန်သွင်း ( ပြန်ခေါ်) ရ၏၊ ( အပြင်ထုတ်ခြင်း၊ အတွင်းသွင်းခြင်းတို့ကို ၀ိနည်းကံအရ ဉတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရ၏ )။
၅။ ရဟန်းလောင်းက မိမိအား ရဟန်းပြုပေးပါရန် သံဃံ ဘန္တေ-စသည် (ပါဠိ-မြန်မာ) ကို ဆို၍ သံဃာတော်အား လျှောက်ထားရ၏၊ မိမိဆန္ဒအလျောက် ရဟန်းပြုလိုသူကိုသာ ရဟန်းခံပေးနိုင်၍ ထိုသို့လျှောက်ထားရခြင်း ဖြစ်သည်။
၆။ သမ္မုတိရ သံဃာတော်ကပင် ရဟန်းလောင်းအား မေးစိစစ်ရ၏၊ ရဟန်းဖြစ်ထိုက်သော အင်္ဂါနှင့် ညီညွတ်သူကိုသာ ရဟန်းခံပေးနိုင်၍ ရဟန်းဖြစ်ထိုက်သော အင်္ဂါနှင့် ညီမညီ သိရှိနိုင်ရန် မေးစိစစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
၇။ သံဃာတော်များက ဉတ္တိစတုတ္ထ ကမ္မ၀ါစာကို ရွတ်ဖတ်ကြရ၏၊ ဤဉတ္တိစတုတ္ထ ကမ္မ၀ါစာသည် ရဟန်းအဖြစ်၌ အချုပ်အခြာ ပဓာနဖြစ်၏၊ ရွတ်ဖတ်ရာ၌ များသောအားဖြင့် တကြိမ် သုံးပါးနှုန်းဖြင့်၊ အမြဲနေမည့်ရဟန်း ဖြစ်လျှင် အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်လောက် ရွတ်ဖတ်လေ့ရှိကြသည်။ ပထမအကြိမ်ကပင် နည်းလမ်းတကျ ရွတ်ဖတ်နိုင်လျှင် ထိုပထမအကြိမ် ကမ္မ၀ါစာအဆုံးမှာပင် ရဟန်းဖြစ်တော့၏။ တကြိမ်တည်းဖြင့် စိတ်မချရ၍၄င်း၊ ပိုမိုခိုင်မြဲစေလို၍၄င်း အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရဟန်းဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ရဟန်းသစ် သန္တာန်၌ လူတို့၏ သီလသိက္ခာထက် သာလွန်မြင့်မြတ်သော အဓိသီလသိက္ခာ တည်သွားသည်။ ရှောင်ကြဉ်လိုက်နာဖွယ် သိက္ခာအကျဉ်း(၂၂၇)သွယ်၊ အကျယ်ကုဋေကိုးထောင်ကျော် ရဟန်းကျင့်ဝတ် သိက္ခာပုဒ်များလည်း ရောက်လာတော့၏။ ထိုသိက္ခာပုဒ်များတည်းဟူသော ဥပဒေဘောင်အတွင်းက နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ရဟန်းဘ၀ကို ရှင်သန်စေရ၏။
၂။ ပါရာဇိက ကျလောက်သော သူတပါးပစ္စည်း ခိုးမှု
၄။ မိမိမှာ တကယ်မရှိဘဲ ဈာန်မဂ်ဖိုလ်တရား ရှိကြောင်း ပြောဆိုမှု-တို့မှ ရှောင်ကြဉ်ရန်
ပညတ်ထားသော ဥပဒေလေးမျိုးတို့ကို မကျူးလွန် မဖောက်ဖျက်သမျှ ရဟန်းစစ် ရဟန်းမှန်ပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ရဟန်းဘ၀၌ နေသမျှ ထိုဥပဒေ လေးမျိုးတို့ကို မဖြစ်မနေ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော်က မိမိတပည့် ရဟန်းသစ်အား သိမ်ထဲမှာပင် သွန်သင် ဆုံးမတော်မူ၏။
ရှိခိုးထိုက်သော အသွင်အပြင်အားဖြင့် (၂)မျိုးရှိသည်။
(၁) ဖန်ရည်ဆိုးသော သင်္ဃန်းကို ၀တ်ရုံခြင်း ၊(လှပတင့်တယ်သော အရောင်အဆင်းရှိတဲ့ အ၀တ်အစား ကို ရှောင်ကြဉ်လိုက်ခြင်း၊ကာမဂုဏ်ကို အသွင်ဖြင့် သတ်ခြင်း ၊
(၂) ဦးခေါင်းကို ရိတ်တုံးထားခြင်း ။ (ဦးခေါင်းတန်ဆာဆင်ခြင်း ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေးအလှအပထားခြင်း များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ၊ အိန္ဒိယမှာတော့ ဒါတော်တော်ကို စွန်ပတာတဲပ အစဉ်အလာလုပ်ရပ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့က ဆံပင်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေးကို အရမ်းအလှဆင်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်နေလို့တဲ့)
ရှိခိုးထိုက်သောဂုဏ်အရည်အချင်းအားဖြင့်အချက်ပေါင်း(၂၀) (၁) သေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ် အသွင်ရှိခြင်း
(၁၅)သုတ်လွှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကာမဂုဏ်ကို ဖယ်ကြဉ်ခြင်း
(၁၈ ) သီလ၊သမိာပညာဂုဏ်တို့တွင်မွေ့လျော်ခြင်း
သိက္ခာတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရဟန်းတော်များက သိမ်အတွင်း ရဟန်းလောင်းကို ဥတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာဖတ်၍ ရဟန်းခံပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သိက္ခာတင်ရာ အောက်ပါ အချက် (၅) ချက်နှင့် ပြည့်စုံရမည်၊ မပြည့်စုံပါက ရဟန်းမဖြစ်နိုင်ချေ။
၁.ရဟန်းလောင်းသည် လူသား ယောက်ျားစင်စစ် ဖြစ်ခြင်း၊ (နဂါး၊ ဂဠုံတို့က လူယောင်ဆောင်ထားသူ မဖြစ်စေရ)၊ (နပုံး ပဏ္ဍုက်နှင့် မိန်းမ မဖြစ်စေရ။)
၂.သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော သိမ်အတွင်း ရှိခြင်း၊
၃.သီလစင်ကြယ်သော ရဟန်းကောင်း အနည်းဆုံး (၅) ပါး ရှိခြင်း၊
၄.ဿတ်ဖတ်ကြားရာ ဋ္ဌာန်ကရိုဏ်း တိကျ မှန်ကန်ခြင်း၊
၅.ကမ္မ၀ါစာ (၃) ကြိမ်ကို မှန်ကန်စွာ ဖတ်ရွတ်ပေးခြင်း။
သိက္ခာချခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိသည် ရဟန်းသီလကို ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောကြားခြင်းပင် ဖြစ်သည်၊ သိက္ခာချပြီးနောက်ပါရာဇိကအမှုများကို ကျူးလွန်ပါက ရဟန်းမဟုတ်တော့ပြီဖြစ်၍ ပါရာဇိကအာပတ်မသင့်တော့ပါ၊ ပါရာဇိကကျ ပြီးသော ရဟန်းမှာလည်း သီလသိက္ခာမရှိတော့ပြီဖြစ်၍ သိက္ခာချရန် မလိုတော့ပါ၊ သိက္ခာ ချရာ အောက်ပါအချက် (၆)ချက်နှင့် ပြည့်စုံရမည်။
၁။ အမှန်တကယ် ရဟန်းအဖြစ်ဖြင့် မနေလိုခြင်း(သိက္ခာချလိုစိတ်ရှိခြင်း )
၂။ သတ်မှတ်ထားသည့် သိက္ခာချ စကားလုံး မှန်ကန်ခြင်း၊
၃။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလဖြင့် ပြောဆိုခြင်း၊
၄။ နှုတ်ဖြင့် ပီသစွာဆိုခြင်း၊ (လက်ဟန်ပြခြင်း၊ စာရေးခြင်းဖြင့် သိက္ခာချ လျှင် သိက္ခာမကျချေ၊)
1. ဘုရားကို စွန့်ပါ၏။ (ဗုဒ္ဓံ ပစ္စက္ခာမိ)
2. တရားတော်ကို စွန့်ပါ၏။ (ဓမ္မံ ပစ္စက္ခာမိ)
3. သံဃာတော်ကို စွန့်ပါ၏။ (သံဃံ ပစ္စက္ခာမိ)
4. ရဟန်းသိက္ခာကို စွန့်ပါ၏။ (သိက္ခံ ပစ္စက္ခာမိ)
5. ၀ိနည်းတော်ကို စွန့်ပါ၏။ (၀ိနယံ ပစ္စက္ခာမိ)
6. ပါတိမောက် (၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ် မာတိကာ) ကို စွန့်ပါ၏။ (ပါတိမောက္ခံ ပစ္စက္ခာမိ)
7. ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ် အကျဉ်းချုပ်ကို စွန့်ပါ၏။ (ဥဒ္ဒေသံ ပစ္စက္ခာမိ)
8. ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကို စွန့်ပါ၏။ (ဥပဇ္ဈာယံ ပစ္စက္ခာမိ)
9. ဆရာကို စွန့်ပါ၏။ (အာစရိယံ ပစ္စက္ခာမိ)
10. အတူနေတပည့်ကို စွန့်ပါ၏။ (သဒ္ဓိဝိဟာရိကံ ပစ္စက္ခာမိ)
11. အနီးနေ တပည့်ကို စွန့်ပါ၏။ (အန္တေ၀ါသိကံ ပစ္စက္ခာမိ)
12. ဥပဇ္ဈာယ်တူ ရဟန်းကို စွန့်ပါ၏။ (သမာနုပဇ္ဈာယကံ ပစ္စက္ခာမိ)
13. ဆရာတူတပည့်ကို စွန့်ပါ၏။ (သမာနာစရိယံ ပစ္စက္ခာမိ)
14. အတူနေ သီတင်းသုံးဖော်ကို စွန့်ပါ၏။ (သဗြဟ္မစာရိံ ပစ္စက္ခာမိ)
15. အကျွန်ုပ်ကို လူဝတ်ကြောင်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (ဂိဟီတိ မံ ဓာရေဟိ)
16. အကျွန်ုပ်ကို ဥပါသကာဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (ဥပါသကောတိ မံ ဓာရေဟိ)
17. အကျွန်ုပ်ကို အရာမ်စောင့်၊ ကျောင်းစောင့်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (အာရာမိကောတိ မံ ဓာရေဟိ)
18. အကျွန်ုပ်ကို ရှင်သာမဏေဟူ၍ မှတ်တော်မူပါလော့။ (သာမဏေရောတိ မံ ဓာရေဟိ)
19. အကျွန်ုပ်ကို တိတ္ထိ (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီး ) ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (တိတ္ထိယောတိ မံ ဓာရေဟိ)
20. အကျွန်ုပ်ကို တိတ္ထိတပည့်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (တိတ္ထိယသာဝကောတိ မံ ဓာရေဟိ)
21. အကျွန်ုပ်ကို ရဟန်းမဟုတ်တော့ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (အသမဏေတိ မံ ဓာရေဟိ)
22. အကျွန်ုပ်ကို သာကီဝင်မင်းသား ဘုရားသားတော်မဟုတ်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့၊ (အသကျပုတ္တိယောတိ မံ ဓာရေဟိ)
23. ဘုရားသည် ငါ့အတွက် အကျိုးမရှိ၊ တော်ပြီ၊ တန်ပြီ၊ (အလံ မေ ဗုဒ္ဓေန)
24. ဘုရားသည် ငါ့အတွက် ဘာလုပ်ဖို့လဲ၊ (ကိံ နု မေ ဗုဒ္ဓေန)
25. ငါသည် ဘုရားကို အလိုမရှိပြီ၊ ဘုရားသည် ငါ့အတွက်မလိုတော့ပြီ၊ (နအတ္ထော မေ ဗုဒ္ဓေန)
26. ငါသည် ဘုရားလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ပြီ၊ (သုမုတ္တော ဟံ ဗုဒ္ဓေန)
အထက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ထားသော သိက္ခာချ စကားလုံး ၂၆-လုံး တို့အနက် တစ်လုံးလုံးကို ပါဠိဘာသာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ မိမိနားလည်ရာအခြားဘာသာ စကားဖြင့်ဖြစ်စေ ရွတ်ဆိုခွင့်ရှိသည်။ ဘုရားကို စွန့်ခဲ့ပြီဟု အတိတ်ကာလဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘုရားကို စွန့်တော့မည်ဟု အနာဂတ်ကာလဖြင့် လည်းကောင်း ပြောဆိုလျှင် သိက္ခာမကျချေ၊ စွန့်ပါ၏ဟု ပစ္စုပ္ပန်ကာလဖြင့် ပြောဆိုမှသာ သိက္ခာကျသည်။ သိက္ခာချရာ ယောက်ျား မိန်းမ မည်သူ့ထံ မဆိုသိက္ခာချနိုင်၏။ နားထောင်သူ အနေဖြင့် ဤရဟန်းသည် သိက္ခာ ချသည်ဟု ချက်ချင်းနားလည်ရမည်။
ထို့ကြောင့် ၀ိနည်း နားလည်သူအထံ တွင်သာသိက္ခာချသင့်၏။ ၀ိနည်းနားမလည်သူ ထံ သိက္ခာချလိုပါက သိက္ခာချခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ကြိုတင်ရှင်းလင်း ပြောပြပြီး နောက်မှသာ သိက္ခာချသင့်သည်။ ဤခေတ်္ပ ဒုလဘရဟန်းခံသူတို့သည် သိက္ခာကျအောင် သိက္ခာချဖို့ အရေးကြီး၏။ သိက္ခာမကျဘဲ လူဝတ်လဲ၍ မိမိအိမ်ပြန်လာပါက သင်္ကန်းဝတ်စဉ်က ပါရာဇိကမကျဘဲ ပုဆိုးဝတ်ပြီးမှ ပါရာဇိကကျမည်ကို သတိပြုသင့်ကြသည်။
၁. မာတုဂါမ = ယနေ့မွေးစ သူငယ်မကိုပင် မကိုင်ရ၊ သာယာစိတ် ရှိလျှင် သံဃာဒိသိသ်အာပတ် သင့်၏။ သာယာစိတ်မရှိသော်လည်း တမင်သက်သက်ကိုင်လျှင် ဒုက္ကဋ်အာပတ် သင့်၏။ မတော်တဆ ထိမိတိုးမိလျှင် အာပတ်မသင့်။ မိခင်၊ နှမ စသော ဆွေမျိုးတော် စပ်သူကို မိသားစုချစ်ခင်စိတ်ဖြင့် ကိုင်လျှင် ဒုက္ကဋ်အာပတ် သင့်သည်။ ရေနှစ်သော မိခင်၊ ရေတွင်းထဲကျသော မိခင်ကိုပင် လက်ဖြင့်မဆွဲမကိုင်ရ၊ ၀ါးလုံး၊ ကြိုး စသည်ကို လှမ်းပေး၍ ဆွဲတင်ကယ်ဆယ်ရမည်။ လက်ကိုလှမ်းဆွဲပါဟုမပြောရ၊ ကြောက် အား လန့်အားဖြင့် လာရောက်ဆွဲကိုင်ဖက်ထားပါမူကမ်းစပ်ရောက် အောင် ကူးခပ်လာရမည်။ အာပတ်မသင့်ချေ။ မိမိ၏ ကာယပယောဂ၊ ၀စီပယောဂ မပါစေရ။
၃. မာတုဂါမ၏ ရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်ထု၊
၆. ထန်းသီး၊ အုန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး စသော အသီးအမျိုးမျိုး၊
၇. ပုလဲ၊ ပတ္တမြား၊ ရွှေ၊ ငွေ စသော ရတနာအမျိုးမျိုး၊
၈. ငွေစက္ကူ၊ ငွေအင်္ဂါး အသပြာ အမျိုးမျိုး၊
အထက်ပါ ပစ္စည်းဝတ္တုတို့ကို ကိုင်တွယ်သုံးသပ်ပါက ဒုက္ကဋ်အာပတ် သင့်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] ဆွမ်းမခံအပ်သော (၆)ဌာန
ရဟန်းသံဃာတော်များသည် အောက်ဖော်ပြပါ (၆)ဌာနသို့ အကျွမ်းတ၀င် ပြု၍ အမြဲဆွမ်းမခံအပ် -
၆. သေတင်းကုပ် (အရက်ဆိုင်)
အကပ်ခံအင်္ဂါ (၅) ပါး
1. ဆက်ကပ်လိုသည့် ပစ္စည်းကို အကပ်ခံမည့် ရဟန်းထံသို့ ရှေ့ရှုဆောင်ယူခြင်း (အနည်းငယ်မျှပင်ဖြစ်စေ ရှေ့ရှုညွတ်စေခြင်း )။
2. ပေးလှူသောလက်နှင့် ခံယူသောလက် မှတစ်ပါး အခြားသော ကိုယ်အင်္ဂါဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တဦး နှစ်တောင့်ထွာ ဟတ္ထပါသ် အတွင်းသို့ရောက်ခြင်း။
3. ကပ်အပ်သောပစ္စည်းနှင့် ထည့်ရာ တင်ရာဖြစ်သော သပိတ်၊ ပန်းကန်၊ ခွက်၊ စားပွဲခုံ စသော ၀တ္ထုသည် အားအလယ်အလတ် ရှိသော ယောက်ျား မြှောက်ချီနိုင်သော ၀တ္ထုဖြစ်ခြင်း။
4. ဆက်ကပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်အင်္ဂါဖြင့် ပေးလှူ ဆက်ကပ်ခြင်း။ ကိုယ်အင်္ဂါနှင့်ဆက်စပ်သော သပိတ်၊ ပန်းကန်၊ ခွက် စသည်ဖြင့် ပေးလှူဆက်ကပ်ခြင်း။ ခံယူသော ရဟန်း၏ လက်၊ သပိတ်၊ ခွက်စသည်တို့္ပ ကျရောက်အောင် ပစ်လွှင့်၍ ဆက်ကပ်ခြင်းအားဖြင့် သုံးမျိုးသော ဆက်ကပ်ခြင်းတို့တွင် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်ကပ်ခြင်း။
5. အကပ်ခံသောရဟန်း၏ ကိုယ်အင်္ဂါ(လက်)ဖြင့် ခံယူခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါနှင့်ဆက်စပ်သော သပိတ်၊ ပန်းကန်၊ ခွက် စသည်ဖြင့် ခံယူခြင်း အားဖြင့် နှစ်မျိုးသော ခံယူခြင်းတို့တွင် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ခံယူခြင်း၊
ဤအင်္ဂါ ငါးပါးနှင့်ညီအောင် ဆက်ကပ်ခံယူလျှင် အကပ်မြောက်သည်။
မပြောင်းမရွှေ့နိုင်သော ပျဉ်ချပ် ကျောက်ဖျာစသည်ဖြစ်စေ၊ သစ်ငုတ် သစ်ပင်စသည်နှင့် တွဲချည်ထားသောညောင်စောင်း၊ အင်းပျဉ်စသည်္ပဖြစ်စေ ဆက်ကပ်ရန်ပစ္စည်းကို တင်၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။ သစ်ပင်ဖြစ် (ပေါက်) နေ၍ မခူး ရသေးသော ပဒုမ္မာကြာရွက်၊ ပေါက်ရွက်၊ အင်ဖက် စသည်္ပ ထည့်၍ ကပ်လျှင်လည်း အကပ်မမြောက်။ ဆက်ကပ်မည့် ပစ္စည်းကို ဆောင်ယူ၍ မရနိုင်လောက်အောင် သေးငယ်သော မန်ကျည်းရွက်၊ သျှားရွက် စသည် ထည့်၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။ အားအလယ် အလတ်ရှိသော ]]ထာမမဇ္ဈိမ}} ယောက်ျား မမြှောက်နိုင်လောက်အောင် ကြီးသောစားပွဲခုံကြီး ပေါ် ခဲဖွယ် ဘောဇဉ်တို့ကို တင်၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။ ထမင်း ဟင်း ပါသော ထမင်းအိုးကြီး၊ ဟင်းအိုးကြီးစသည်ကို လူအများ ၀ိုင်းမ၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] အကပ်ပျက်ခြင်းအင်္ဂါ (၆) ပါး
အကပ်ခံပြီးသော ပစ္စည်းများသည်အောက်ပါ အကြောင်း တစ်ပါးပါးကြောင့် အကပ်ပျက်၏။ သုံးဆောင်လိုလျှင် ထပ်မံ အကပ်ခံရ၏။
၁။ သိက္ခာချ (လူထွက်) ခြင်း၊
၂။ သူခိုးဓားပြတို့ အနိုင်အထက် လုယူခြင်း၊
၃။ သေ (ပျံလွန်) ခြင်း၊
၄။ ရဟန်းယောက်ျားအဖြစ်မှ ရဟန်းမိန်မအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားခြင်း၊
၅။ (အစွန့်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ထင်ရှားမရှိဘဲ မိမိဘာသာ မစားတော့ပြီ၊ တော်ပြီတန်ပြီဟု ဆုံးဖြတ်ကာ) ကိုယ်အင်္ဂါ၊ စိတ် နှစ်ပါးလုံးဖြင့် ဖြစ်စေ၊ စိတ်သက်သက်ဖြင့်ဖြစ်စေ စွန့်လွှတ်ခြင်း။
၆။ လူ သာမဏေ စသည်တို့အား စိတ်အာလယပြတ် ပေးစွန့်ခြင်း စသဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်းအင်္ဂါ ခြောက်ပါးရှိ၏။
နွားလှည်း၊ မြင်းရထား၊ ကား စသည်တို့ သွားသောအခါ ထသောဖုန် မြူမှုန့်မပါ၊ စင်ကြယ်သော ရေကို အကပ်မခံဘဲ သောက်ကောင်း၏။
ဖျော်ရည်၊ သားငါးအရည်၊ ထမင်းရည် စသည်တို့နှင့် မရောမနှော စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော ရေကို မကပ်ဘဲ သောက်ကောင်း ၏။ ရွံ့၊ ညွန် စသည်တို့နှင့် ရောနေသော ရေဖြစ်လျှင် ဓမကရိုဏ် (ရေစစ်) ဖြင့် စစ်ပြီးမှ သောက်ရ၏။
သွားချေးသည် သွားနှင့်ကပ်ငြိနေစဉ် စားလိုက အကပ်မခံဘဲ စားကောင်း၏။ မတော်တဆ ၀မ်းတွင်းသို့ ရောက်သွားသော်လည်း အပြစ်မရှိ၊ သွားတိုက်တံ၊ ဒန်ပူစသည်တို့ဖြင့် ခြစ်မိ၍ သွားမှလွတ်လျှင် အကပ်ခံပြီးမှ စားကောင်း၏။
နှပ် (နှာရည်) သည် နှာခေါင်းအတွင်း ကပ်ငြိနေစဉ် နှာခေါင်းမှ တွဲလျားကျ၍ အောက်သို့ ပြတ်မကျသေးမီ စားလိုက အကပ်မခံဘဲ စားကောင်း၏။ နှာခေါင်းမှအောက်သို့ပြတ်ကျသွားလျှင် အကပ်ခံပြီးမှ စားကောင်း၏။ မျက်ချေး၊ နားချေး (နဖာချေ၊ ကိုယ်ပေါ်ချွေးထွက်၍ ပေါက်သော ဆား၊ မျက်ရည်၊ တံတွေး၊ သလိပ်၊ ကျင်ငယ်။ ကျင်ကြီးတို့လည်း အလားတူပင် ဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်အင်္ဂါ ကပ်ငြိနေစဉ် ကိုယ်အင်္ဂါမှ တွဲလျားကျသော်လည်း ဉပတ်ပြတ်မကျသေးမီဖြစ်လျှင် အကပ်မခံဘဲ သုံးစွဲကောင်း၏။
ရဟန်းနှင့် သာမဏေများ၊ မိမိမယ်တော် ခမည်းတော်နှင့် မယ်တော် ခမည်းတော်တို့အား ပြုစုလုပ်ကျွေးသူ၊ မိမိအား ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်ပေးသူနှင့် ရှင်လောင်းတို့အား ဆေးကုပေးအပ်၏။ လူနာအား ဆေးနည်းကို ပြောပြခြင်း၊ ထိုလူနာ၏ ပစ္စည်းဖြင့် ဆေးဖော်စပ်ပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ်မိမိပစ္စည်းဖြင့် ဆေးဖော်စပ်တိုက်ကျွေးကုသခြင်းပြုနိုင်၏။ အကယ်၍ မိမ္ပိ ဆေးပစ္စည်းမရှိပါက ဆွေးမျိုးများနှင့်ဖိတ်ကြားထားသော ဒါယကာများထံမှ အလှူခံ၍ လည်းကောင်း၊ မရပါက နေမွန်းလွဲအချိန်တွင် အိမ်စဉ်လှည့်လည်ရပ်၍ ဆွမ်းခံသကဲ့သို့ ဆေးပစ္စည်း အလှူခံ၍ လည်းကောင်း ဆေးပစ္စည်းရှာဖွေဖော်စပ် ကုသရမည်။
ထို့ပြင်ရဟန်းနှင့် ဆွေခုနစ်ဆက် မျိုးခုနစ်ဆက် တော်စပ်သူများအား ၎င်းင်းတို့၏ ဆေးပစ္စည်းဖြင့် ဆေးဖော်စပ်၍ ကုသခွင့်ရှိ၏၊ အကယ်၍ မိမိဆေးပစ္စည်းဖြင့် ကုသပေးရပါက နောင်တစ်ချိန်တွင် အစားပေးကြရန် ပြောဆို၍ ကုသရမည်၊ အလိုက်သိ၍ အစားပြန်ပေးက ယူရမည်၊ ပြန်မပေးက မတောင်းရ။
ဆေးပညာ တတ်ကျွမ်းသော ရဟန်းသည် မိမိအတူနေ ဆရာရဟန်း၊ တပည့်ရဟန်း၏ မိခင်ဖခင်တို့အား မလွဲမရှောင်သာ၍ ဆေးကုသပေးရပါက ထိုရဟန်းပိုင် ဆေးဝါးဖြင့် ကုသပေးရမည်၊ ထိုရဟန်း ဆေးမရှိပါက မိမိဆေးဝါးများကို ထိုရဟန်းပိုင် အဖြစ်ပေးအပ်ပြီးမှ ထိုဆေးဖြင့် ကုသပေးရမည်။
ထို့ပြင် အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော ဥပဒေမဲ့ လက်နက်ကိုင်များ၊ စစ်ရှံးလာသော ဘုရားနှင့် မင်းမှုထမ်းများ၊ ခရီးသည်နှင့် ဆွေမရှိမျိုးမရှိအထီးကျန်သူတို့သည် မကျန်းမာသဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခိုလာပါက ဆေးကုသပေးနိုင်သည်။
သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံ၍ ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝသော ဘုရားဒါယကာ ကျောင်းဒါယကာ အလှူဒါယကာတို့ကို ဆေးပေးခြင်း၊ ဆေးကုခြင်းမပြုရ။ ထိုပစ္စည်းလေးပါး ဒါယကာက တပည့်တော်၏ မိခင် နေမကောင်း၍ ဆေးနည်း ပြောပြပါဘုရား ဆေးကောင်း ညွှန်ပြပါဘုရားဟု လျှောက်ထားလျှင်၊ ဆေးပညာတတ်သော ရဟန်းသည် တိုက်ရိုက်ပြန်မပြောရ၊ အနီးရှိ ရဟန်းသာမဏေတစ်ပါးအား "မည်သည့်ရဟန်း မည်သည့်ရောဂါ ဖြစ်စဉ်က မည်သည့်ဆေးဖြင့် ကုသပျောက်ကင်းဖူးကြောင်း" ပြောကြားရမည်။ ဒါယကာဖြစ်သူက နံဘေးမှ ကြားနာမှတ်သား၍ သူ၏မိခင်အား ထိုဆေးနည်းအတိုင်း ကုသပါလျှင် ထိုရဟန်းမှာ ကုလဒ အမှု ပြုရာ မရောက်၊ အာပတ်မသင့်ချေ။
သို့မဟုတ် ဒါယကာဖြစ်သူ ၀ိနည်းနား လည်သဖြင့် မည်သူဖျားနာသည်၊ မည်သူအတွက်ဟူ၍ မရည်ညွှန်းဘဲ "ဤရောဂါကို မည်သည့်ဆေးဖြင့် ကုသရသနည်း"ဟု ဆေးပညာသဘောသက်သက် ကိုသာ မေးရာ ထိုရောဂါ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့် ဆေးနည်းများကို ပြောပြခွင့်ရှိ၏။
[ပြင်ဆင်ရန်​] အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား မဟုတ်
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာသနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်စပ်၍ သာသနာတော်၌ ၀တ်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေလို၊ ရလည်း ရလွယ်၊ တန်ဖိုးလည်း နည်း၊ အပြစ်လည်း ကင်းစင်သော ပစ္စည်းလေးပါး ရှာဖွေ သုံးစွဲနည်းမျိုးကို လိုလားတော်မူ၏၊ ထိုဗုဒ္ဓ၏ အလိုဆန္ဒတော်အတိုင်း ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော်က ဆွမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်စဉ်လှည့်လည် ဆွမ်းခံစားဖို့၊ သင်္ကန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပံ့သကူသင်္ကန်းမျိုးကို ၀တ်ရုံဖို့၊ ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သစ်တပင် ၀ါးတပင် ကျောင်းမျိုး၌ နေဖို့၊ ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ နွားကျင်ငယ်ရေဖြင့် စိမ်ထားသော ဆီးဖြူ သျှိသျှားဆေးမျိုးကို သုံးဆောင်ဖို့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ချပြီး မိမိတပည့် ရဟန်းသစ်အား မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ဘုန်းကံအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကောင်းစား ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ ကျောင်း၊ ဆေး တို့ကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူရ၏။ --Mayor mt 09:01, 25 ဧ​ပြီ 2009 (UTC)
1. ↑ ဒီဃနိကာယ် ၊မဟာဝဂ် ၊ မဟာပဒါနသုတ်
2. ↑ မိလိန္ဒ ပညာ
3. ↑ ဗုဒ္ဓက မုနိ သုတ်တော်
4. ↑ http://mawluu.blogspot.com/2009/03/blog-post_15.html
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Saturday, 25 December 2010
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဆေးမြီးတိုများ |
ကထိန်ဆိုသော ဝေါဟာရသည် ကထိန ပါဠိပုဒ်မှ ဆင်းသက်လာသည်။ မြန်မာ့စာပေများတွင် ပါဠိစကားလုံးများကို မွေးဖွား အသုံးပြုထားသည်ကို များစွာ တွေ့ရသည်။ ကထိန်ဆိုသော မြန်မာစကားလုံးသည်လည်း ထိုနည်းတူစွာ မွေးစားစကားလုံးဖြစ်သည်။ အနုဇာနာမိ ဘိက္ခဝေ ၀ဿဝုဋ္ဌာနံ ဘိက္ခူနံ ကထိနံ အတ္ထရိတုံ။ ဆိုလိုသည်မှာ- ၀ါဆိုပြီးသော ရဟန်းတော်များအတွက် ကထိန်သင်္ကန်း ခင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုတော်မူသည် ဟု ၀ိနည်း မဟာဝါပါဠိတော်မှာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် နုတ်တော်မှ ထွက်လာသော မဟာကရုဏာစကားတော်ဖြစ်ပါသည်။ ကထိန်ဆိုတာ မြဲမြံခိုင်ခန့်ခြင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
1. အကျိုးငါးအင် အာနိသင်များကို တပြိုင်တည်း ရနိုင်သော အမှု၊
2. ဘုရားစသား ပုဂ္ဂိုလ်များက ချီးမွမ်းအပ်သော အမှု၊
3. သစ်ပင်ကြီးကဲ့သို့ မြဲမြံ ခိုင်ခန့်သော အမှု၊
4. သင်္ကန်းဖြတ်၊ ချုပ်၊ ဆိုးခြင်း၊ လှူခြင်း၊ ခင်းခြင်း စသော ကထိန်နှင့်စပ်သမျှ ခေါ်ဝေါအပ်သော စကားကို ကထိန (ကထိန်) ဟု ခေါ်သည်။
ကထိန်ခင်းခြင်းသည် ရှေးဘုရားရှင်များ လက်ထက်တော်ကပင် ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်မှ ရေတွက်သော် ရှစ်ဆူမြောက် ပဒုမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကထဲက ကထိန်ခွင့်ပြုထားသည်ကို ဗုဒ္ဓ၀ံသဋ္ဌကထာမှာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုဘုရားရှင်လက်ထက်တော်၌ ဥသဘ၀တီမြို့သူ မြို့သားတို့သည် အဂ္ဂသာဝက သာလမထေရ်မြတ်အား ကထိန်သင်္ကန်းလှူခဲ့သည်၊ ထိုကထိန်သင်္ကန်း ချုပ်ရာတွင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် အပ်ချည် ကိုးပေါက် အပ်နဖားထိုးပေးခဲ့သည်ဟု တွေ့ရသည်။
လက်ရှိကမ္ဘာတွင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာလည်း ထိုကထိန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အစဉ်အလာ ရှိခဲ့ည်။ ပါဝေယျတိုင်းသာ ဘဒ္ဒ၀ဂ္ဂီ ညီနောင် ၃ ကျိပ်တို့ကို အကြောင်းပြု၍ ကထိန်သင်္ကန်းဖြစ်လာသည်။ ကောသလမင်းကြီးနှင့် ညီအကိုတော်သော ဘဒ္ဓ၀ဂ္ဂီညီနောင်တို့သည် မိန်းမတစ်ယောက်ပျောက်၍ မိန်းမရှာ ထွက်လာစဉ် အရှင်ဂေါတမသည်လည်း ဘုရားဖြစ်ခါစ ဥရုဝေဠတောသို့ ကြွလာရာမှာ တွေ့စုံမိကြသည်။ ထိုညီနောင် သုံးကျိပ်တို့တွင် ဘုရားရှင်၏တရားတော်ကို နာကြားရ၍ အချို့ သောတာပန်၊ အချို့ သကဒါဂမ်၊ အချို့သော သူများက အနာဂါမ် အဖြစ် တရားထူးများ ရရှိကာ ဧဟိဘိက္ခု ရဟန်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဧဟိဘိက္ခု- ငါ့ရှင်ရဟန်းတို့ လာကြဟု ခေါ်လိုက်ရုံဖြင့် သူတို့၏ ရှေးဘုန်းရှေးကံကြောင့် အလိုအလျောက် ရဟန်းအသွင် ဖြစ်သွားကြသည်။ ထို့နောက် ထို ညီနောင်ရဟန်းတော်တို့သည် တခုသော နေရာတွင် တောရဆောက်တည်ခြင်း စသော ဓုတင်အကျင့်များကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြသည်။
ထိုရဟန်းတော် ညီနောင်တို့သည်ဓုတင်အကျင်းများ ကျင့်ရင်း ပါဝါမြို့မှ သာဝတ္ထိမြို့သို့ ဘုရားဖူးကြွရာ ၆ ယူဇနာ ခရီးဝေးသဖြင့် သာဝတ္ထိမြို့ ၀ါဆိုမီ မရောက်နိုင်ကြ။ လမ်းခရီး သာကေတမြို့မှာပဲ ၀ါဆို (၀ါကပ်) တော်မူလိုက်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ၀ါကျွတ် ပ၀ါရဏာပြုပြီး နောက်တနေ့ သာဝတ္ထိမြို့သို့ ဘုရားဖူးရန် ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ လမ်းခရီးမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းချသဖြင့် ရဟန်တော် ညီနောင် အားလုံး မိုးမိကာ ရေ၊ ရွှံ့ညွှန်၊ တို့ဖြင် ညစ်ပေ နေလျက် ဘုရားရှင်အား ဖူးမျော်ကန်တော့ကြသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကို အကြောင်းပြု၍ ကထိန်သင်္ကန်း ခွင့်ပြုတော်မူသည်။
* မှတ်ချက်။ ။ ၀ါတွင်း မိုးမိ၍ ၀ါဆိုသင်္ကန်းခွင့်ပြု၊ ၀ါကျွတ်မိုးမိ၍ ကထိန်သင်္ကန်းခွင့်ပြု။ ဘုရားရှင်က သူ့ သား တပည့်ရဟန်းတော်များကို သင်္ကန်း ၀တ်စရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မပင်ပန်းစေချင်တဲ့ မဟာကရုဏာဖြင့် သင်္ကန်းများ ခွင့်ပြုဟန်ပင်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားသည် ဇေတဝန် ကျောင်းတော်မြတ်၌ ကိန်းဝပ် စံမ္ပယ် တင့်တယ်စွာ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် သင်္ကန်းလျာ နွမ်းနယ်ပါးရှား ပါဝေယျကရဠတိုင်းသား ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီညီနောင် သုံးကျိပ်တို့အား အကြောင်းပြု၍ ကထိန်အလှူ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဝါတွင်း သုံးလပတ်လုံး ဝါမကျိုးမပျက်ပဲ ပဝါရဏာပြုသော ရဟန်းရှိရာ ​ကျောင်းတိုက်၌ ကထိန်ခင်းကြသည်။ ကထိန်ခင်းရာ၌ သင်္ကန်းတစ်ထည်ကို ဖြစ်စေ အများကို ဖြစ်စေ ’ဣမံစီဝရံ သံဃဿဒေမိ’ ဤသင်္ကန်းကို သံဃာတော်များအား လှူဒါန်းပါ၏ဟု လျှောက်ထား၍ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြသည်။
သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသခင်အား ဖူးမြှော်ရန် ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီ ရဟန်းသုံးကျိပ်တို့သည် မိမိတို့ ဝါဆိုဝါကပ်ရာ ကေတပြည်မှ ဝါကျွတ်သောအခါ ​ခြေလျင်ခရီးဖြင့် ကြွလာကြ၏။ ထိုအခါ မိုးကြီး သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့် ရဟန်းများ မိုးရေစိုစွတ် ကြကုန်သည်။ ထိုသို့ မိုးရေစိုစွတ်သော သင်္ကန်းဖြင့်ပင် ပူဇော်ကြရသည်ကို မြတ်စွာဘုရားသခင် မြင်တွေ့ရသောအခါ ထိုခရီးသည် ရဟန်းတို့ကို အကြောင်းပြု၍ ပူရိမ ဝါကပ်ခြင်း၌ ပြည့်စုံသော ရဟန်းတို့အား ကထိန်ခင်း ခွင့်ပြုကြောင်း ပညတ်တော်မူခဲ့သည်။
ကထိန်ပွဲတော်ကို ’မိုးလကုန်စဲ ကထိန်ပွဲ’ဟူသော ဆိုရိုးနှင့်အညီ၊​ သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့မှ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့အထိ ခင်းကျင်းရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂံခေတ်အခါကပင်လျှင် အစပြု၍ ကထိန်ခင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ယခုခေတ် ကထိန်ခင်းရာတွင် မရှိနွမ်းပါးသော ရဟန်းအားဖြစ်စေ၊ အကြီးဆုံး မထေရ်အားဖြစ်စေ ကပ်လှူရန် ဥတ်သင်္ကန်းအပြင် အခြံအရံ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်း လှူဒါန်းလေ့ရှိသည်။
ကထိန်ခင်းရ၌​ သံဃိက စစ်စစ် ဖြစ်သင့်သည့်အတွက် အလှူ့တကာများက မည်သည့်ပစ္စည်းကား သံဃိကပစ္စည်း၊​ မည်သည့်ပစ္စည်းကား ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်း ဖြစ်သည်ဟု ခွဲခြားလျှောက်တင်ကြားသင့်ပေသည်။ ကထိန်ခင်း၍ သင်္ကန်းရရှိသော ရဟန်းတို့မှာ ကထိန်အာနိသင်ငါးပါး ခံစားရကြောင်း ကျမ်းဂန်များတွင် မိန့်ဆိုထားသည်။
ကထိန်ခင်းရန် ကိစ္စ ၈-ပါး
1. ကထိန်သင်္ကန်းကို အလှူခံမှု၊
2. ကထိန်ခံထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို သံဃာတော်တို့က စိစစ်ရွေးချယ်ပေးမှု၊
3. ထိုရွေးချယ်ခံရသူအားသိမ်တွင်း၌ ကမ္မဝါဖတ်၍ ကထိန်သင်္ကန်းကို ပေးမှု၊
4. တိစီဝရိက် အဓိဋ္ဌာန်တင် သင်္ကန်းဟောင်းကိုပစ္စဒ္ဓိုရ်ပြု အဓိဋ္ဌာန်စွန့်မှု၊
5. ခင်းမည့် သင်္ကန်းသစ်ကို ကပ္ပဗိန္ဒုထိုးမှု၊
7. နှုတ်မြွက်၍ ခင်းမှု၊
ကထိန်ခင်းမည့်ရဟန်း၏ အင်္ဂါ ၈-ပါး
၄င်းအင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော ရဟန်းမှသာကထိန်ခင်းထိုက်သည် ဆို၏။
1. ပုဗ္ဗကရဏံဇာနာတိ- ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ရမည့်ကိစ္စရပ်တို့ကို သိရ ပြုရခြင်း၊
2. ပစ္စုဒ္ဓါရံ- ပစ္စုဒ္ဓိရ်ပြုတတ်ရခြင်း၊
3. အဓိဋ္ဌာနံ- အဓိဋ္ဌာန်တင်တတ်ရခြင်း၊
4. အတ္ထာရံ- ခင်းပုံခင်းနည်း သိထားရခြင်း၊
5. မာတိကံ- မာတိကာကို သိထားရခြင်း၊
6. ပလိဗောဓံ- ကြောင့်ကြကို သိထားရခြင်း၊
8. အာနိသံသံ- အာနိသင်တို့ကို သိထားရခြင်း။
ကထိန်သင်္ကန်းသည် ပုဂ္ဂလိက (ပုဂ္ဂိုလ်)ကို ရည်မှန်း၍မလှူရ၊ စတုဒိသာ-အရပ်လေးမျက်နှာမှ သံဃာတော် အားလုံးကို ရည်ရွယ်၍ လှူရပါသည်။ ဣမံ ကထိနစီဝရံ သံဃဿ ဒေမ။ ဥတ်ကထိန်သင်္ကန်းကို သံဃာထုတဲတွင် သင်္ကန်းရှားပါးသူကို ရွေးချယ်ပြီး လှူဒါန်းရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရွေးချယ်ရာဝယ် သင်္ကန်းရှားပါးသူမရှိပါက အကြီးဆုံး မထေရ်ကြီးကို လှူရပါသည်။ ဒါဆို ကထိန်းသင်္ကန်းလှူတော့ ဘာအကျိုးရှိလဲ မေးစရာရှိလာတယ်၊ ဘယ်အကျိုးမျော်ကိုး၍ ကထိန်သင်္ကန်းများ လှူကြသလဲ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ကထိန်းသင်္ကန်းလှူခြင်းကြောင်း အကျိုးငါးပါးရတယ်ဆိုတာ ယနေ့ခေတ် လူအတော်တော်များများ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ကထိန်အကြောင်းပြောကြပြီဆိုတော့ ထိုအကျိုးငါမျိုးကိုတော့ ချန်ထားလို့ မဖြစ်ပြန်။
အလှူရှင်များက ရဟန်းတို့အား မအပ်စပ်သော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ဆွမ်းပင့်ဖိတ်ကပ်သော်လည်း အပြစ်မသင့်။ ဥပမာ-ရဟန်းတော်များ ထမင်းဘုန်းပေးကြွပါ၊ ခေါက်ဆွဲ ဘုန်းပေးကြွပါ၊ မုန့်ဟင်းခါး ဘုန်းပေးကြွပါဟူသော အသုံးနှုန်းဖြင့် ပင့်ဖိတ်အပ်သော ဆွမ်းကို လက်ခံပါက ရဟန်းတော်များအား အပြစ်ဖြစ်သည်၊ ထိုအသုံးနှုန်းဖြင့် ပင့်ဖိတ်ခြင်း လက်မခံအပ်။ ဆွမ်းဘုန်းပေးကြွပါ၊ ခေါက်ဆွဲဆွမ်း ဘုန်းပေးကြွပါ၊ မုံ့ဟင်းခါးဆွမ်း ဘုန်းပေးကြွပါ စသည်ဖြင့် ဆွမ်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါရှိရပါသည်။
ကထိန်ခင်းရသော ရဟန်းတော်များ ခံစားရသည့် ကထိန်အကျိုး၅-ပါးဖြစ်သည်။
1. အနာမန္တ စာရ- ထင်ရှားရှိသော ရဟန်းကို မပန်ကြားမူ၍ မြို့တွင်းရွာတွင်း ဆွမ်းဖိတ်ရာအိမ်သို့သွားနိုင်ခြင်း၊
2. အ သမာဒါန စာရ- အဓိဋ္ဌာန်တင်ပြီး ဆောင်သောသင်္ကန်းကို မယူမူ၍ သွားနိုင်နေနိုင်ခြင်း၊
3. ယာဝ ဒတ္ထ စီဝရ- အလိုရှိတိုင်း သင်္ကန်းကို အဓိဋ္ဌာန် ဝိကပ္ပနာမပြုမူ၍ထားနိုင်ခြင်း၊
4. ဂဏ ဘောဇန- ထမင်းစားကြွပါ စသည်ဖြင့် မအပ်သောဖိတ်ခြင်းရှိသောဂဏဘောဇဉ်ကို စားနိုင်ခြင်း၊
5. ကထိန်ခင်းသော ကျောင်းတိုက်၌ ကထိန်ခင်းပြီးနောက် တပေါင်းလပြည့်နေ့အတွင်း သံဃာအားလှူသောသင်္ကန်းလျာပုဆိုးကိုလည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် သင်္ကန်းကိုလည်းကောင်း၊ ထိုကျောင်းတိုက်ရှိ ကထိန် အနုမောဒနာပြုသော ရဟန်းတို့သာ ရနိုင်ခြင်း 
ယခုပြဆိုသော အကျိုး ၅ ပါးကို ကထိန်ခင်းသော ရဟန်းနှင့် ကထိန်းခင်းရာဝယ် နုတ်ဖြင့် ၀မ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်သော ရဟန်းအားလုံး ကထိန်းခင်းသည့် နေ့မှ စ၍ တပေါင်းလပြည့်တိုင်အောင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၀ါကျိုးဝါပြတ်သော ရဟန်း၊ ပစ္ဆိမ၀ါကပ်သော ရဟန်းများနှင့် အခြားကျောင်းမှာ နေသော ရဟန်းများ ထိုအကျိုး ၅ မျိုးကို ခံစားခွင့်မရှိ။ သို့သော်လည်း ကင်္ခါဋီကာသစ်မှာတော့ ကထိန်မခင်းသော်လည်း သင်္ကန်းကာလ (သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်မှ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ နံပါတ် (၂ ) အကျိုးကလွဲ၍ ကျန် အကျိုးအာနိသင် ၄ ပါးကို ခံစားခွင့်ရှိသေးသည်ဟု ဆိုထားသည်။
1. သံဃာဋိ- ဒုကုဋ်ခေါ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီး
2. ဥတ္တရာသင်္ဂေါ- ကိုယ်ဝတ်ခေါ် ဧကသီ
3. အန္တရ ဝါသကောခါးဝတ်ခေါ် သင်းပိုင်
[ပြင်ဆင်ရန်​] ကထိန်မြောက်သော သင်္ကန်းများ
* အဟတေန အတ္တတံ ဟောတိ ကထိနံ
သင်္ကန်းအသစ်ဖြင့် ကထိန်ခင်းမှ ကထိန်မြောက်ပါသည်။
* အနိမိတ္တကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ဘယ်သင်္ကန်း ၊ ဘယ်အမျိုးအစား သင်္ကန်း စသည်ဖြင့် နိမိတ်မပြပဲ အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းမှ ကထိန်မြောက်ပါသည်။
* အပရိကထာကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ဤသင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းမည်ဟု ပရိယာယ်မဆိုပဲ အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန်မြောက်ပါသည်။
* အကုက္ကုကတေန အတ္ထေတံ ဟောတိ ကထိနံ
မငှားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန်မြောက်ပါသည်။
* အသန္နိဓိကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ကထိန်ခင်းမည့် နေ့မရောက်မီ ကျောင်း၌ မသိုမှီး မထိန်းသိမ်းထားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန်မြောက်ပါသည်။
* အနိဿဂ္ဂိယေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ကထိန်ခင်းမည့် နေ့မရောက်မှီ ကျောင်းကို ကြိုတင် ပို့မထားသော သင်္ကန်း ၊ ကထိန်ခင်းမည့် နေ့ရောက်မှ ကျောင်းကို ပို့သော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန်မြောက်သည်။
* ပဉ္စကေန ဝါ အတိရေကပဉ္စကေန ဝါ တဒဟေဝ သဥ္ဆိန္နေန သမဏ္ဏလီကတေန အတ္ထတံ ကထိနံ။
ကထိန်ခင်းသည့် နေ့တွင် အိမ်ကြီးအိမ်ငယ်နှင့်တကွ ငါးခန်း (သို့မဟုတ်) ငါးခန်းထက်ပိုအောင် ဖြတ်ချုပ်ထားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန်မြောက်သည်။
[ပြင်ဆင်ရန်​] ကထိန် မမြောက်သော သင်္ကန်းများ
* န ဒဠှီကမ္မကရဏ မတ္တေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
နှစ်လွှာစပ်ကာမျှဖြင့် နှစ်လွှာစပ်ထားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန်ခင်းသည် မမည်။
* န နိမိတ္တကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ဤသင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းမည်ဟု နိမိတ်ပြသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန်မမြောက်။
* န ပရိကထာကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ဤသင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းမည်ဟု ပရိယာယ်ဆို၍ ရသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန် မမြောက်။
* န ကုက္ကုကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ခေတ္တ ငှားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန် မမြောက်။
* န သန္နိကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ကထိန်ခင်းမည့် နေ့ မရောက်မီ ကျောင်း၌ သိုမှီးထားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန် မမြောက်။
* န နိဿဂ္ဂိယေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ကထိန်ခင်းမည့် နေ့ မရောက်မီ ကျောင်းကို ကြိုတင်ပို့ထားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန် မမြောက်။
* န အညတြ ပဉ္စကေန အတိရေကပဉ္စကေန ဝါ တဒဟေဝ သဦ္ဆန္နေန သမဏ္ဏလီကတေန အတ္ထတံ ဟောတိ ကထိနံ
ကထိန်ခင်းသည့် နေ့တွင် အိမ်ကြီးအိမ်ငယ်နှင့်တကွ ငါးခန်း (သို့မဟုတ်) ငါးခန်းထက် ပိုအောင် ဖြတ်မထားသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းလျှင် ကထိန် မမြောက်။
ကထိန်သင်္ကန်းအား ညတ်သင်္ကန်း၊ ကထိန်လျာသင်္ကန်း၊ မိုးပေါ်ကျသင်္ကန်း၊ မသိုးသင်္ကန်းဟု အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ကထိန် ညတ်သင်္ကန်းဆိုသည်မှာ..
ကထိန် ခင်းထိုက်သော ရဟန်းအား ကထိန်ခင်းမည့် သင်္ကန်းကို ညတ္တိဒုတိယ ကမ္မ၀ါစာဖတ်ပြီး ပေးအပ်ရသည်ကို စွဲ၍ ကထိန် ညတ်သင်္ကန်းကြီးဟု ခေါ်ကြပါသည်။ ကထိန်ခင်းမည့် သင်္ကန်းသည် ဒုကုဋ် နှစ်ထပ်သင်္ကန်းမှ ညတ်သင်္ကန်းဟု မဆိုလိုပါ။ သင်းပိုင်၊ ဧကသီ တထည်ထည်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သင်းပိုင်၊ ဧကသီ ထွဲထားသည့် ဒွိစုံဖြင့် လည်း လှူဒါန်း နိုင်ပါသည်။ 
1. ↑ ဝိနည်းမဟာဝါ- ကထိနက္ခန္ဓက
2. ↑ (မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော် ၊ စာမျက်နှာ ၃၅၃)
3. ↑ (မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော် ၊ စာမျက်နှာ ၃၅၃)
4. ↑ (တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာ အဘိဓာန်၊ က-၀ဂ်၊ အတွဲ-၅၊ ၁၉၉။)